21 March 2015 – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ – ၆
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်
တစ်ရက်ကျတော့ ကျွန်တော် ကျောင်းတက်နေတုန်း တန်းလန်းမှာ အိမ်အောက်ထပ်က ကိုအောငံ ထင်တယ်၊ ဆရာမကို ခွင့်တောင်းပြီး ကျွန်တော့်ကို လာခေါ်သွားတယ်။
မေမေဘွားဘွား ဆုံးသွားလို့ပါ။ အဘွားသေရင် မြေးပျော်တယ်လို့ အဆိုရှိပေမယ့် ကျွန်တော် ပျော်လည်း မပျော်မိသလို သိပ်လည်း ထိထိခိုက်ခိုက် မဖြစ်ခဲ့မိဘူး။ ၀တ္တရားတစ်ခုလိုပါပဲ။
မေမေဘွားဘွားကို နေ့ချင်းပဲလား မသိဘူး၊ ကြံတောမှာ မီးသင်္ဂြိုလ်လိုက်ပါတယ်။ အသုဘရယ်လို့လည်း စည်စည်ကားကား မရှိ၊ ခြောက်တိခြောက်ကပ်။ မန္တလေးက သူ့သားအရင်း ဦးကြီးကိုကိုလည်း မလာဘူး ထင်တယ်။ သေချာမမှတ်မိတော့ဘူး။ မေမေကလည်း လင်ပူမိနေတာနဲ့ပဲ အမေသေတာတောင် သိပ်ဝမ်းနည်းပုံ မရဘူး။ ညတိုင်ကျရင် မေမေဘွားဘွားက အမေရေ၊ အမေရေနဲ့ ညည်းညူနေရှာတာကိုလည်း မေမေက ငြူစူ ဆောင့်အောင့်နေခဲ့တာတွေတော့ ခပ်ရေးရေး မှတ်မိတယ်။
အမှန်က အဲဒီ့ကတည်းက တရားရခဲ့ဖို့ ကောင်းမှာဗျ။ အခုကျမှ ပြန်စဉ်းစားတော့ မေမေဘွားဘွားရဲ့ ဘ၀ကြီးက သနားစရာပါ။ အိမ်ထောင်ရေး ကံ၊ သားသမီးကံ မကောင်းဘူးလို့ အလွယ်ပြောနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း လင်ကုန်ရှုံးတော့ တစ်သက်လုံး မှောက်လို့ပဲ ပြောရမလားတော့ မသိဘူး။ အကောင်း စစ်စစ်ကနေတောင် အကန်းဘ၀နဲ့ အရိုးထုတ်ခဲ့ရတာကိုး။
မေမေဘွားဘွား ရက်လည်တော့ မေမေဘွားဘွား ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ကျပ် ၆၀ တန်၊ သုံးထပ်သား ကြမ်းခင်းနဲ့ ခေါက်ခုတင်ကို ကျွန်တော် အပိုင်စားရပါတယ်။ အဲဒီ့ ခုတင်အစုတ်လေးပေါ်မှာ ကျွန်တော် နှစ်ပေါင်းများစွာ အိပ်ခဲ့တာ၊ အိမ်ထောင်ကျတော့မှပဲ ကိစ္စ ပြတ်တော့တယ်။
အဖေ့ဇာတ်လမ်းက ဘာမှန်း ယနေ့ထက်တိုင် သဲသဲကွဲကွဲ မသိပါဘူး။ သို့ပေမယ့် အမေနဲ့တော့ တခြိမ်းခြိမ်း ဖြစ်နေတာပါပဲ။ မေမေဘွားဘွားရက်မလည်ခင် တစ်ညမှာဆို အမေက ဒိန်းဒလိန်းနတ်ပူးပြီး အိမ်ကို မိုးတော်တော်ချုပ်တဲ့အထိ ပြန်မလာဘူး။ တစ်အိမ်လုံး ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း။
ကလေးအရွယ် လူမမယ်ဘ၀ကတည်းက တစ်ယောက်တည်း နေတာ ကျင့်သားက တရားလွန်ရပြီး ဖြစ်လို့မို့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ မထူးဆန်းပါဘူး။ ကျွန်တော်က သရဲတွေ ဘာတွေ ကြောက်ချင်ယောင် ဆောင်ပြတတ်ပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ ကြောက်လည်း မနေမိတော့ဘူး။
ကျွန်တော့်စိတ်က ဆန်းတာပဲလား၊ လူတိုင်း သည်လိုပဲလားတော့ မသေချာဘူး။ တစ်ခုခုဆို ကျွန်တော်က သိပ်အသည်းအသန် ဖြစ်တတ်တယ်။ စားချင်လည်း တရားလွန်၊ သွားချင်လည်း တရားလွန်၊ ကြောက်ချင်လည်း တရားလွန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ရှောင်လွှဲလို့ မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီ့ တရားလွန်စိတ်တွေ ဘယ်ပျောက်ကုန်မှန်း မသိတော့ဘဲ သွေးအေးအေးနဲ့ ထီမထင်သူ၊ အလွန်ထုံပေပေနိုင်သူ၊ ရွဲ့တတ်သူ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
လူမုန်လာဥ၊ လူကြက်ဥနဲ့ လူလက်ဖက်ခြောက်ဆိုပြီး ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ လူသုံးမျိုးသုံးစားထဲက လူကြက်ဥပေါ့။ အစိမ်းဘ၀တုန်းကတော့ အထိမခံဘူး။ ကွဲလွယ် ရှလွယ်တယ်။ လောကဓံဆိုတဲ့ ရေနွေးပွက်ပွက်နဲ့ တွေ့ရင်တော့ တစ်ခါတည်းကို မာတင်းသွားတတ်တာမျိုးလေ။
အဲတုန်းက အမေ့ကို ကျွန်တော် ပြောမိတယ်။ “အမေ့ယောက်ျားကြီးကို ကွာလိုက်ပါဗျာ။ ကျွန်တော် ရရာ အလုပ် လုပ်ပေးပြီး အမေ့ကို ရှာကျွေးပါ့မယ်”လို့။ မသိဘူးလေ၊ မေမေက အရိုးကွဲအောင် အရိုက်ခံထားရလို့ အသည်းစွဲအောင် ချစ်နေတာလားတော့ မသိဘူး။ ပြောလည်း ပြောပြောပဲဗျ။
အဖေ့ကိုတော့ ကျွန်တော် တစ်စက်ကလေးမှကို ချစ်လို့ မရဘူး။ ရွံကြောက်ကြီး ကြောက်နေတာပဲ ရှိခဲ့တယ်။ အဖေကလည်း ပြောပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်က သူ့အဖေကို မချစ်တာမို့ ၀ဋ်လည်တော့မှာပါတဲ့။ ကျွန်တော် အဲဒီ့ကတည်းက လက်မခံခဲ့ဘူး။ ကိုယ်ပြုသမျှကံက ကိုယ့်ဆီ ပြန်လာမှာပဲလို့ တွေးခဲ့ပါတယ်။ အဖေ ကျွန်တော့် အပေါ် ကြင်ကြင်နာနာ နွေးနွေးထွေးထွေးသာ ဆက်ဆံခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် အဖေ့ကို မချစ်စရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိပါဘူး။
အခု ကျွန်တော့်ဘ၀က ခွေးကတက်မှာ ကိုယ့်ဘာသာ အေးအေးအိပ်နေတဲ့ ခွေးလို ဖြစ်နေတယ်။ အဖေ တစ်လောကလုံးကို စိတ်တိုင်းမကျတိုင်း အ၀င်တစ်ခါ အထွက် တစ်ခါ ဆောင့်နင်းလို နင်းသွား၊ ကန်လို ကန်သွားနဲ့ စိတ်ရှိတိုင်း အလုပ်ခံနေရတဲ့ ခွေးဘ၀။ သူ့ဒေါသတွေ အထုပ်ဖြည်ရာပဲ။
စိတ်ထဲမှာ အနာကျည်းဆုံးက အသားနာလို့ အော်တာ၊ ငိုတာကိုပဲ အသံမထွက်ရ မငိုရဆိုပြီး ဆင့်ဆင့်ရိုက်ပြီး ပိတ်ပင်တာပဲ။ အဲဒါ လူမဆန်ဆုံးပဲ။ လူစိတ်အကင်းမဲ့ဆုံးပဲ။
အိမ်ထဲမှာ စိတ်ညစ်ရသမျှ အပြင်ရောက်ရင် ကျွန်တော် လွတ်ပြီ။ အလွန်ဗရုတ်ကျ၊ အလွန်ကဲတဲ့သူ ဖြစ်ပါပြီ။ ရယ်စရာတွေကို ကြံဖန်ရှာနေတဲ့သူပေါ့။
ကျွန်တော် အမြဲလို ပြုံးရယ်နေတတ်တာကို သမီးက သူ့ဆယ်တန်း စာစီစာကုံးထဲမှာ ထည့်ရေးဖူးတယ်။ အမှန်တော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ အနာတွေနဲ့၊ တစ်ချိန်လုံး ငိုရှိုက်နေတာ ဘယ်သူမှ မသိဘူး။
ကျွန်တော် ရှစ်တန်းနှစ်မှာ ကျိုင်းတုံက အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက် ရန်ကုန်ကို ဆယ်တန်း လာတက်တယ်။ လောပိတမှာကတည်းက ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ လျှပ်စစ်ဌာနက အဖေ့ မိတ်ဆွေ အင်ဂျင်နီယာရဲ့ အမျိုးသမီးက ကျိုင်းတုံသူ။ သူကတစ်ဆင့် သူ့ဆွေနီးမျိုးစပ် တစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ ထမင်းလခ ပေးစားခိုင်း၊ အဆောင်လို သဘောမျိုး အနေခိုင်းတာပါ။ သူ့ကို အထပ်ခိုးလေး အပိုင်စားပေးထားပါတယ်။
အဲဒီ့အစ်ကိုကြီးက သူ့ဟာသူ ဘာသိဘာသာနေတာပါ။ စကားလည်း သိပ်များများ မပြောဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ တစ်ယောက်တည်း တွေတွေငေးငေး အကြာကြီး နေတတ်တယ်။
မှတ်မိနေတာက ရှစ်တန်း စာမေးပွဲ ဖြေနေဆဲ တန်းလန်းမှာ အဖေနဲ့ အမေနဲ့ အကြီးအကျယ် ရန်ဖြစ်ကြပြန်တာ။ ကျွန်တော် သိပ်စိတ်ညစ်သွားတယ်။ အရပ်ထဲမှာလည်း ရှက်လှပြီ။
စာမေးပွဲကို ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းမှာ မဟုတ်ဘဲ ခရိ(ခ်)လမ်း (အခု ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းလို့ ခေါ်တယ် ထင်တာပဲ)ပေါ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနဲ့ နီးတဲ့ဘက်က အထက်တန်းကျောင်းကြီးမှာ ဖြေနေရတာ။ ကျွန်တော် သိပ်စိတ်ညစ်တာနဲ့ စာမေးပွဲ သွားမဖြေတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အိမ်မှာနေနေတဲ့ အဲဒီ့အစ်ကိုကြီးက စာမေးပွဲ ဖြေဖို့ ဖျောင့်ဖျတယ်။ ကျွန်တော်လည်း နားညည်းလာတာနဲ့ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ လွယ်အိတ် ဆွဲပြီး အပြင်ထွက်လာတယ်။ အမှန်ကတော့ ခြေဦးတည့်ရာ လျှောက်သွားဖို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့အစ်ကိုကြီးက နောက်က ကပ်ပါလာပြီး ကျွန်တော့်ကို အတင်းချုပ်လို့ စာမေးပွဲခန်း အရောက် ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ စဉ်းစားမိတယ်။ အမေနဲ့ ပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါလည်း လေးငါးဆယ်ကြိမ်မက အဲဒီ့အတွေးကို နှုတ်က ထုတ်ပြီး ပြောခဲ့မိပါတယ်။
“အမေတို့၊ အဖေတို့ လုပ်ပုံနဲ့ ကျွန်တော် ဘိန်းစား၊ သူခိုး၊ လူဆိုး၊ ကြမ်းပိုး ဖြစ်ရမှာဗျ။ အခုလောက်ရှိ အသက်တောင် ရှိနေဖို့တောင် မကောင်းတော့ဘူး။ ဆိုးမိုက်ရင်း သေသွားဖို့ သိပ်ကောင်းနေပြီ။ ကျွန်တော့်မှာ ရှိနေတဲ့ စိတ်ကောင်းလေးကြောင့် အဲလို ဘ၀မျိုး ရောက်မသွားတာကို နောင်တရလို့ မဆုံးဘူးဗျ”လို့ပါပဲ။
အမှားလုပ်လည်း ရိုက်၊ မမှားလည်း ရိုက်၊ ပန်းကန်လေးတစ်လုံး ခွဲမိလည်း ရိုက်၊ အရိုက်သံသရာမှာ နေရတာ သိပ်များလာတဲ့အပြင် စောစောက ပြောသလို အသားနာတာကိုတောင် ခံစားခွင့်အပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ ဘ၀ကြီးက အတော့်ကို ခါးသီးလှတယ်။
ကျွန်တော့်ဘ၀ကို ကျွန်တော် မကျေနပ်ဘူး။ ခက်တာက ပြေးစရာလည်း မြေမရှိဘူး။ အားကိုးရာ မဲ့နေတယ်။ ထွက်ပြေးပြန်လည်း အမေ့ကို သနားမိတဲ့စိတ်နဲ့ မပြေးရက်ဘူး။ အမှန်တော့ ထွက်ပြေးမိခဲ့ရင် သိပ်ကောင်းမှာလို့ အခုကျတော့ တွေးမိနေရပြန်တယ်။ ဘ၀ကို နာကျည်းတဲ့စိတ်က အခုလို အဟောင်းတွေကို အစုတ် ပြန်လုပ်တော့ ဖျင်းဖျင်း ဖျင်းဖျင်းနဲ့ ပေါ်လာပြန်တယ်။
ကျောင်းစာကိုလည်း ကျွန်တော် သိပ်စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး။ ၀တ်ကျေတန်းကျေသာ ကျောင်းတက်နေတာ၊ ၀တ္တရားရှိလို့ တစ်နှစ် တစ်တန်း မှန်မှန်အောင်အောင် နေနေရတာ။ ရည်မှန်းချက်တွေ ဘာတွေလဲ မရှိဘူး။ ကျွန်တ်ာဖြစ်ချင်တာက ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ အဆိုတော်၊ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ၊ စာရေးဆရာ။
အဖေက တုတ်ပြပြီး စာကျက်ခိုင်းရင် ကျက်ချင်ယောင်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ စိတ်က ရောက်ချင်ရာ ရောက်နေတော့တာပါပဲ။ မွန်းကြပ်နေတဲ့ ဘ၀မှာ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကသာ ကျွန်တော့်ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ထွက်ပေါက်။
စာတွေ ရေးတယ်၊ ကဗျာတွေ စပ်တယ်၊ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးတယ်။ စာအုပ်တွေလည်း တအားဖတ်တယ်။ စာပေဗိမာန်စာကြည့်တိုက်မှာ နှစ်စဉ်ကြေး သုံးကျပ်ပေးထားရင် စာအုပ်လေးအုပ်ကို နှစ်ပတ်ငှားလို့ရတယ်။ ကျွန်တော်က နှစ်ရက်တစ်ခါလောက် ငှားဖတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဖတ်ချင်တာ ဖတ်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော် ငှားလာတဲ့ စာအုပ်ကို အဖေ့ဆီ တင်ပြရသေးတာ။ သူက လှန်လှောကြည့်ပြီး သဘောတူမှ ဖတ်ရတာ။
ကျွန်တော့်ကို လုံးဝ မဖတ်ရလို့ ပိတ်ပင်ထားတဲ့အထဲမှာ စံရွှေမြင့်ကာတွန်းရုပ်ပြပါတယ်။ ရည်းစားထားချင်စိတ် ပေါ်မှာစိုးလို့တဲ့။ စာမဖတ်၊ ပေမဖတ်၊ ပညာအခြေခံ အလွန်နည်းလှတဲ့ အဖေ့ရဲ့ သားသမီး ပျိုးထောင်နည်းတွေပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော့်သားလေး ရှစ်တန်းအောင်သွားတော့ သူ့အတန်းပိုင်ဆရာမကို သွားကန်တော့တဲ့အခါ ကျွန်တော် ပါသွားတယ်။ ဆရာမက ကျွန်တော့်ကို တိုင်တယ်။
“ဆရာ့သားက လိမ္မာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းပိတ်ခါနီးမှ ဘာဖြစ်တယ် မသိဘူး၊ ရည်းစားတွေ ဘာတွေ ထားလို့ ဆရာရယ်…”တဲ့။
ကျွန်တော် သူ့ဆရာမကို ဘယ်လို ပြန်ပြောလိုက်သလဲ သိလား။
“ဟုတ်ကဲ့… အဲဒါ ကျွန်တော် မြှောက်ပေးလိုက်တာပါ ဆရာမ”လို့။
ဟုတ်တယ်။ အဲဒီ့နှစ် သီတင်းကျွတ် ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ သူ့သဘောနဲ့သူ မေမြို့မှာ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား သွားနေတဲ့ သမီးကြီးကို သွားကြိုဖို့ ကားတစ်စီးနဲ့ သားအဖနှစ်ယောက် ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ အဲတုန်းက လမ်းသစ် မပေါ်သေးဘူး။ လမ်းဟောင်းက သွားကြတာ။ ညဘက်ကြီး တစ်ညလုံး မောင်းပေါ့။
သားအဖနှစ်ယောက် စကားတပြောပြောနဲ့။ တစ်ချီမှာ သူ့နှလုံးသား ရေးရာအကြောင်း မေးမိတယ်။ ဖအေဆိုတော့ သိနေတယ်လေ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က သားသမီးတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဖို့ပဲ တစ်ချိန်လုံး ပျိုးထောင်နေခဲ့တာ။ အမှန်ကို ပြောလို့ ဆူတာတွေ၊ ပူတာတွေတောင် မလုပ်ဘူး။
ကျွန်တော့် သားသမီးတွေအတွက် စည်းကမ်းက တစ်ချက်တည်းရယ်။ မလိမ်ရ၊ မဖုံးရပဲ။ မှားတာတော့ ကြိုက်တာ မှားလာ၊ ခွင့်လွှတ်တယ်။ လိမ်ရင် ဖုံးရင် ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မလိမ်ဘူး။
အဲတော့ သူအသည်းကွဲနေတာ ကျွန်တော် သိနေတာပေါ့။
“မင့်ဟာမလေးနဲ့ အခြေအနေက ဘယ်လိုလဲ၊ အဆင်မပြေသေးဘူးလား”လို့ စမေးလိုက်တယ်။
“ပညာသင်ချိန်မှာ ဒါတွေ မစဉ်းစားသေးဘူးလို့ ပြောတယ်ဗျ”
“နွားမတွေ၊ အဲလိုပဲ။ သူတို့ကြိုက်ရင် ဘာသံမှ မထွက်ဘူး။ သူတို့မကြိုက်ရင် တောင်ပြော မြောက်ပြောနဲ့…”
“အဲဒါဆို ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဟင်”
“သားကို ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေ မရှိဘူးလား”
“သူတို့ထဲက တစ်ယောက်နဲ့ ရည်းစားထားကြည့်လိုက်ပေါ့…”
“အာ… သားမှ မကြိုက်တာလေ…”
“ဟကောင်ရေ… မင်းသေချာ စဉ်းစားစမ်း။ ကနေ့ မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ကန်နေတဲ့ ကောင်တွေ စကတည်းက လက်ရွေးစင် တန်းဖြစ်တာလား…”
“အေး… ရည်းစားထားတာလည်း အတူတူပဲ။ တစ်ခါတည်း လက်ရွေးစင် တက်ကန်လို့ မရဘူးမောင်။ မင့်ဟာက ဘောလုံးနဲ့ ခြေထောက်နဲ့တောင် ကောင်းကောင်း မထိဖူးသေးပဲ လက်ရွေးစင် မကန်ရလို့ ကျိတ်ဆွေးသလို ဖြစ်နေတယ်ကွ။ ပထမဆုံး အိမ်မှာ ဘောလုံးနဲ့ ခြေထောက်နဲ့ ထိကြည့်၊ ကန်ကြည့်။ အဆင်ပြေမှ အရပ်ကွင်းမှာ ကန်၊ ပြီးတော့ ရပ်ကွက်သင်း ၀င်၊ အဆင့်ဆင့် တက်သွားရတယ် သားရဲ့…”
ဒါနဲ့တင် သီတင်းကျွတ် ကျောင်းလဲ ပြန်ဖွင့်ရော သင်းလည်း ရည်းစားနဲ့ ဘာနဲ့ ဖြစ်သွားပါရောလား။
ပညာသင်ချိန်မှာ ရည်းစားထားရင် ကျောင်းစာ ထိခိုက်မယ်၊ ဘာမယ်ဆိုတဲ့ ပေါချာချာအတွေးအခေါ် ကျွန်တော့်မှာ မရှိဘူး။ လူပဲ၊ အသိဉာဏ်ရှိတာပဲ။ ခုနစ်တန်း၊ ရှစ်တန်းတောင် ရောက်နေမှတော့ သူ့အသိဉာဏ်နဲ့သူ နေနေတာပေါ့။ သည့်ထက် ပိုတာက ကျွန်တော့် သားသမီးတွေကို အသိဉာဏ်ရင့်သန်စေဖို့ စာဖတ်ဝါသနာ အရင့်အမာကို သူတို့ကိုယ်ထဲ ထည့်ပေးပြီးသား။ ဘာမှ ပူစရာ မလိုပါဘူး။
ကျွန်တော်ကသာ အဲလိုတွေးပေမယ့် ကျွန်တော့်ပီတာဖခင်ကြီးကကျတော့ အဲလို မဟုတ်ဘူး။ အသားနာလို့ အော်တာ ငိုတာတောင် တုတ်နဲ့ မရအရ တားမြစ် ပိတ်ပင်သူပီပီ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကို ဘယ်တုန်းကမှ နားလည်း မလည်၊ နားလည်အောင်လည်း မကြိုးစား၊ ထည့်တွက် ငဲ့ကွက်ဖို့ဆို ဝေလာဝေးတဲ့သူလေ။ အဲတော့လည်း ကျွန်တော့်မှာ ပိတ်ပင်တားမြစ်ခံထားရတာတွေက အများသား။
ယုတ်စွအဆုံး မွေ့ရာနဲ့ အိပ်ခွင့်တောင် ဆုံးရှုံးတယ်။ ကြမ်းအမာပေါ်မှာ ဖျာခင်း အိပ်ရတဲ့ ဘ၀။ မွေ့ရာနဲ့ အိပ်ရင် လူပျိုပေါက်ရဲ့ သွေးသားဆန္ဒကို နိုးကြားစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မဟာရွှေဉာဏ်ရှင်ကြီးကို ဖအေတော်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့်ဘ၀ အတော် သာယာတာပဲနော်။
အဖေက စာဖတ်ခွင့်ပေးထားတာပဲ ကျေးဇူးတင်ရပေဦးမယ်။ နောက်တစ်ခု ကျေးဇူးတင်ရမှာက လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ပါပဲ။ တစ်ခါတလေ ညကြီး သန်းခေါင်ပေမယ့် ကြေးအိုး ထွက်စားချင်လည်း စားလို့ ရတယ်။ နေ့လည် နေ့ခင်း လမ်းပေါ် လျှောက်နေလည်း ရတယ်။
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က တော်တော်လျှောက်နိုင်တာ။ မြို့လယ်ပိုင်းတော့ နှံ့နေတာပဲ။
တစ်ခါသားမှာတော့ မျက်စိလည် လမ်းပျောက်ဖူးတယ်။ တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးတဲ့ ဗိုလ်တထောင် ကမ်းနားကနေ အရှေ့ဘက်ကို ဆင်းသွားတာ ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်သွားမှန်း မသိတော့ဘူး။ ကျွန်တော်လူလည်က ဘယ်သူ့မှလည်း မေး စမ်းမနေပါဘူး။ လာရာလမ်းပါ ပျောက်သွားခဲ့ပေမယ့် အနောက်ဘက်ကို ဦးတည်ပြီး ပြန်လျှောက်မယ်ဆိုရင် တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကိုယ်သိတဲ့ လမ်းပေါ်တော့ ပြန်ရောက်မှာပဲဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ပြန်လျှောက်ရပါတယ်။
တကယ်လည်း ပြန်ရောက်ပါတယ်။ လင်းစဒေါင်း (Lansdowne) လို့ ခေါ်တဲ့ အဲဒီ့အချိန်က နံပါတ် ၈ ဟီးနိုးကားရှည်ကြီး ဂိတ်တွေ ဘာတွေအထိကို ရောက်လို့။ အခုတော့ ဘာခေါ်တယ် မသိတော့ဘူး။
ရန်ကုန်မှာနေပြီး ယနေ့ထက်တိုင် ကျွန်တော် မသွားတတ်၊ မလာတတ်တာက ကျောက်မြောင်းပဲ။ ကျောက်မြောင်းထဲ ရောက်သွားရင် အခုထိ မျက်စိလည်လို့ ကောင်းတုန်း။
အရပ်ထဲက အပေါင်းအသင်းတွေကတော့ နည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်က အိမ်ပေါ်က အိမ်အောက် တယ် ဆင်းဆော့တာ မဟုတ်ဘူး။ ဘောလုံးကန်တာတွေ ဘာတွေမှာလည်း အဖြစ် မရှိဘူး။
စိန်ပေါကျောင်းကို ရောက်စက ကျောင်းမှာ တစ်ခါ ၀င်ကန်ဖူးတယ်။ အဲဒါဗျာ၊ ကံက ကောင်းချင်တော့ ဘောလုံးက ကျွန်တော့်ရှေ့ တစ်ပေလောက်အကွာက လိမ့်လာတာ၊ ဘောလုံးနဲ့လည်း နည်းနည်းကလေးမှ မထိလိုက်ဘဲ မှောက်ရက်ကြီး လဲကျန်ရစ်ပါရောလား။
အဲဒီ့မှာတင် ဘောလုံးလောကကြီးကို အကြီးအကျယ် စိတ်နာပြီး ကျောခိုင်းလိုက်တာ ယနေ့ထက်တိုင်ပါပဲ။ 😀
ကျွန်တော်နဲ့ အားကစားနဲ့က အဲသလို။
ပြောရရင် အဲဒါ မိဘနဲ့များ ဆိုင်မလားတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော့် အဖေလည်း ဟုတ်ဟုတ်ငြားငြား ဘာအားကစားမှ မလုပ်ခဲ့။ အမေသည်လည်း ထို့အတူ။ သူတို့က မွေးလာတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားလှ ရွှေသွေး လူကလေး ကျွန်တော့်ကိုလည်း ဘာအားကစားအတွက်မှ မတိုက်တွန်း၊ လဲကွဲ၊ ကျိုးကန်းမှာ ပူခဲ့ကြလေတော့ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လိုလုပ် အားကစားဖြစ်တော့မလဲ။
အမေ ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောဖူးတာ ရှိသေး။ ပါးစပ်ရာဇ၀င်ပေါ့။ အမှန်တော့ မဖြစ်နိုင်တာ။ သူတို့ မန္တလေးက ဘောလုံးသမားတစ်ယောက် သေသွားတာများ အဆုတ်မှာတောင် ဘောကန်ဖိနပ်ရာ ထင်းထင်းကြီးနဲ့ဆိုတဲ့ ပုံပြင်။ နာမည် နာမနဲ့ အတိအကျ ပြောပြီး ၀ါဒဖြန့်ခဲ့လေတော့ ကျွန်တော့်မှာ အားကစား စိတ်ဓာတ်က ပြည့်ဝဖို့နေနေသာသာ တစိုးတစိတောင် ဘယ်လိုလုပ် ရှိနိုင်တော့မှာတုံးဗျာ။
နဂိုကမှ ကျွန်တော်က ခပ်ပျင်းပျင်းဆိုတော့ ပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်ဆို ဘာမှ မလုပ်ချင်တာလည်း ပါတယ်လေ။
အဲ… ဒါတောင် အဖေက ကျွန်တော့်ကို ရေကူးခိုင်းသေးတာ။ ဦးဝိစာရလမ်းက အမျိုးသား ရေကူးကန်ကို အောက်ထပ်က ကိုအောငံ ဦးစီးပြီး အရပ်ထဲက လူငယ်တွေ သွားကြရင် ကျွန်တော်လည်း ပါသွားတာပေါ့။ အဖေကတော့ အဲဒီ့အချိန်မှာ ခရုသင်းရောဂါ စဖြစ်နေပြီမို့ လူကြားထဲ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ မနေချင်တာကြောင့် လိုက်မလာဘူး။ ရေကူးလည်း သင်မပေးနိုင်ဘူး။ သူက ရေတပ်ကလာတာမို့ ကူးတတ်တယ်လို့တော့ ပြောတာပဲ။ ကျွန်တော်လည်း သူ ရေကူးတာ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးလိုက်ဘူး။
ကျွန်တော့်ကို ကိုအောငံက သင်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာလို စနစ်တကျတော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ ခြေဖျား ခတ်တာ ဘာညာပေါ့။ ပြီးတော့ လက်ပစ်ကူးရင် အသက်ရှူနည်းပေါ့။
သူပြောတာတော့ ဟုတ်လို့ပဲ။ ဘယ်ဆို ဘယ်တစ်ဖက်တည်း ခေါင်းကို စနစ်တကျ လှည့်ပြီး အသက်ရှူသွင်း၊ ရေထဲ မျက်နှာ ပြန်အမှောက်မှာ ရှူထားတာကို ထုတ်၊ ပြီးရင် ဘယ်ဘက်ကို ခေါင်းဖော်ရှူ၊ ရေထဲ မျက်နှာအပ် ပြန်ထုတ် စသဖြင့်ပေါ့။
တကယ်လုပ်တော့ မဖြစ်လှပေါင်ဗျာ။ အဲတော့လည်း ခေါင်းကြီးဖော်ပြီး ၀ရုန်းသုန်းကားနဲ့ ခွေးကူးတော့ ကူးတတ်လာတာပေါ့။
ကျွန်တော် လုပ်ဖူးတဲ့ အားကစား
အဲ… အားကစားသာ မလုပ်ချင်တာ။ လူကတော့ လှချင်သားဗျ။
ဒါနဲ့ ကြီးကောင်လေး ၀င်လာတော့ အိပ်ထ မတင်တွေ၊ ကြမ်းပေါ်မှောက်ပြီး လက်နဲ့ထောက် ထတာတွေအပါအ၀င် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားတွေလည်း တော်တော် လုပ်လိုက်သေးတယ်။ အရပ်ကလည်း ရှည်ချင်လွန်းလို့ ထပ်ခိုးတန်းကို ဆွဲဆွဲပြီး ဘားတန်းလုပ် ကစားရတာလည်း အမော။
အဲဒီ့ရောဂါက လူပျိုကြီး ဖားဖား ဖြစ်တဲ့အထိ မပျောက်ဘူး။ အဘိုးနဲ့ တွေ့တော့မှ ကိစ္စက ပြတ်သွားတာ။ အားတိုင်း အရပ်ရှည်ဖို့ အားထုတ်ပြီး တွေ့ရာဆွဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို မြင်တဲ့အခါ အဘိုးက ပြောတယ်။
“မင့်အဖေနဲ့ အမေ သည်လောက်ပုတဲ့ဟာ… မင်းသည်လောက် မြင့်လာ တော်ရောပေါ့။ သည့်ထက် မြင့်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူး ဟကောင်ရ…”တဲ့။
သူပြောတာလည်း ဟုတ်တုတ်တုတ်ရယ်။ အဲဒီ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်က အဖေ့ထက်တောင် နှစ်လက္မလောက် ပိုမြင့်နေပြီလေ။
နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာ ကုလသမဂ္ဂကလေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့ အာဟာရ သင်တန်းကို တက်ခွင့်ရတော့မှ သိသွားတာ။ ကိုယ်ဝန်ရှိစ ပထမ သုံးလမှာ မိခင် အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝအောင် စားထားရင် အဲဒီ့ကလေး လူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အရပ် အလားအလာကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတယ်။ ကိုယ်ဝန် သုံးလကျော်မှ စားသမျှကျတော့ ကိုယ်ခန္ဓာဝဖြိုးမှုအတွက် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုပါပဲ။
ဗမာငပုတွေ ဖြစ်ကုန်တာ မအေတွေ ဗိုက်ကြီးနာ ထတော်မူနေလို့မှန်း သိလာရတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ အဲဒါတွေ မသိခင် မွေးတဲ့ သမီးဦး ကိုယ်ဝန်နဲ့တုန်းက သူ့အမေ ကျွန်တော့်မယား ဗိုက်ကြီးနာ အထကောင်းလိုက်တာ သမီးခမျာလေးမှာ အရပ်မမြင့်ရှာဘူး။
ကံကောင်းချင်တော့ သမီးကို နို့တိုက်လို့ ကောင်းနေဆဲမို့ မဆံ့မပြဲ စားလို့ ကောင်းနေခိုက် သားတော်မောင် ကိုယ်ဝန်ကို ထပ်ရလိုက်တာမို့ မမခမျာ ဗိုက်ကြီးနာ ထဖို့ သတိမရအားဘူး။ သည်မှာတင် သားတော်မောင်က အရပ်မြင့်သွားတယ်။ သည်ကောင်က အလေးတွေ ဘာတွေမပြီး သူ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုတစိုက် လုပ်လိုက်ပြန်တော့ သားတော်မောင် ရင်အုပ်ကားကား ကြွက်သားအဖုဖုတွေ ဘာတွေနဲ့ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
Saw Zar Li ဇာလီကတော့ ဇာလီ့အထက်က အစ်မကြောင့် စာတွေ ဖတ်ဖြစ်ရင်းနဲ့ ဝါသနာပါခဲ့တာ… အဖေနဲ့ အမေကလည်း ကျောင်းဆရာ ဆရာမတွေဖြစ်တာကြောင့် အပြင်စာ ဘာဖတ်ဖတ် မတားခဲ့ဘူး… ဇာလီက အမေ အသက် ၄၀၊ အဖေ့အသက် ၄၄ မှာ အသက်ကြီးမှ မမျှော်လင့်ဘဲ ရခဲ့တဲ့ ကလေးဖြစ်လို့ အထက်က အစ်မနဲ့ ၁၂ နှစ် ကွာပါတယ်… သူတို့ ကျောင်းတွေ ပိတ်နေချိန် ငှားဖတ်သမျှ အကုန်လိုက်ဖတ်ဖြစ်တာ ၇ တန်း အရွယ်ကပါ… ဆရာပီတိဖြစ်အောင် ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒီအစ်မက ဆရာရဲ့ ရေမရောတဲ့ အမာခံ ပရိသတ်စစ်စစ်ပါ… သူကနေတစ်ဆင့် ဆရာ့ကို သိခဲ့ရတာပါ… သရဖူမဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ပါတဲ့ ဆရာ့ ဆောင်းပါးတွေကို ဇာလီ့ကို ပုံမှန် ဖတ်ခိုင်းပါတယ်… အပျိုပေါက်ဖြစ်တော့ ဆရာစာအုပ်တွေ ဝယ်လာပေးတယ်… အခု သူက သာကေတ အထူးကု ဆေးရုံမှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ ဆရာ့စာတွေကြောင့်လား မသိဘူး… အပျိုကြီးပဲ လုပ်နေလေရဲ့  😛 အစ်မက အင်တာနက် သိပ်မသုံးဖြစ်လို့ ကြားထဲကနေ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာပါ… 🙂 စကားမစပ် ကြွားလိုက်အုံးမယ် ဇာလီ့ အရပ်က ငါးပေ ခုနစ်လက်မ ရှိတယ်။ 😛
ATK ဖျား ဖျား… လမ်းတွေ့ရင် လုံးဝ နှုတ်မဆက်ပါနဲ့။ အထူးသဖြင့် အနားကို လုံးဝ မလာဘာနဲ့။ သများ လူဇင်မမှီတာကို လူကြားထဲ ပြသလို ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်လွန်းလို့ အရပ်ရှည်ဒဲ့ဒူဒေဂို တိတ်မုန်းဒယ်။ 🙂
Kyawt Thuzar ကိုယ်က တစ် အိမ်လုံးမှာ အပုဆုံးပါ ၅ပေ ၉ လက်မတည်းရယ် 😛
ATK မင်းသားကြီးရွှေဘရဲ့ မြေးများဖြစ်တဲ့ မရှေဘတွေနဲ့ တွေ့နေပါလား။ အကုန် ဘလော့ပစ်ရ မကောင်း ရှိတော့မယ်။
Sanda Thant သူ့ဆူးတွေ မြင်တော့ ကိုယ့်ဆူးတွေ ပြန်စူးလာပါရောလား
Aung Thu Nyeen တရေးနိုးလာတော့ လာနှုတ်ဆက်တယ်။ ခုတော့ ဆရာ့ဇာတ်ကြောင်း ဖတ်မိပါပြီ။ ထူးဆန်းအံ့သြရပါသည်။ ဆက်ရေး ဆက်ဖတ်ပါမည်။
May Thandar Win သက်ထွေးနဲ့ ကိုငြိမ်းမောင်ကို တခါတခါ မျက်လုံးထဲမြင်ယောင်လာတယ်။ အရက်ပုလင်း ရိုက်ခွဲတဲ့အခန်းမှာ သက်ထွေး ပြန်ပြောသလိုရော ပြန်ပြောခဲ့သေးလားဆရာ 🙂 JK ပါ ဆရာ။ အခု ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း ရင်ထဲမောလိုက်တာ ဆရာ။ 😦 ဒါနဲ့ ဆရာ့အဖေနဲ့အမေ ဘာရာသီဖွားလည်း သိချင်မိတယ်။
ATK အခုမှတွေ့လို့ အခုမှ ဖြေဖြစ်တာ ခွင့်လျွှတ်ပါ သမီး May. အဖေ့ မွေးနေ့ကို မသိပါဘူး။ သိတယ်ဆိုလည်း အမှန်အတိုင်းလို့ ယူဆမိမယ် မထင်ဘူး။ အဖေက အမှန်တွေ သိပ်ပြောမသွားဘူးလို့ ယုံကြည်လို့ပါ။ မေမေကတော့ မတ်လ ၂၈ ရက်မွေးတယ်လို့ သိထားပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက်
လမ်း ၄၀ က အပေါင်းအသင်းတွေ
လမ်း ၄၀ ရောက်ခါစမှာ အပေါင်းသင်းဖြစ်တာက Terrence ဆိုတဲ့ ကပြားတစ်ယောက်ပါ။ သူက လမ်း ၄၀ ထိပ်က တိုက်ရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ နေတယ်။
ကျွန်တော်နဲ သိချိန်မှာ သူ့အဖေက မရှိတော့ဘူး။ သြစတြေးလျံလူမျိုး ဖခင်ပေါ့။ သူ့အမေက ကရင်အမျိုးသမီး ထောင်ထောင် မောင်းမောင်းကြီးပါ။ မျက်နှာဖြူထဲမှာ သြစတြေးလျန်တွေက လှတယ်။ သူတို့ မောင်နှမတွေလည်း လှကြတယ်။ သူ့မှာ မောင်နှမ သုံးယောက်ရှိတယ် ထင်တယ်။ သူက အငယ်ဆုံး။ သူ့အစ်မအကြီးဆုံးကလည်း တော်တော် ချောတာ။ အမေရိကန်သံရုံးမှာလား မသိဘူး၊ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အဲဒီ့ Terrence ကြောင့် မိုနိုပိုလီဆိုတာကို ဘ၀မှာ ပထမဆုံး စ ကစားဖူးတယ်။ မိုနိုပိုလီ ဗြိတိသျှမူ ထင်တယ်။ တော်တော် သဘောကျသွားတဲ့ ကစားနည်းပဲ။
သူက နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်လည်း ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆူးလေဘုရားအနီး ဘားလမ်းထောင့်က ဧမာနွေလ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းကို စ ရောက်ဖူးခဲ့ပြန်တယ်။ သာသနာပြုကျောင်းတွေမှာ နေခဲ့ဖူးတော့ ခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့ မစိမ်းလှပေမယ့် သာသနာပြု ကျောင်းတွေက ဘုရင်ဂျီ [ရိုမန်ခက်သလစ်(ခ်)] ဂိုဏ်းခွဲမို့ ပုံစံချင်း မတူဘူး။ နှစ်ခြင်းရဲ့ သဘောသဘာဝကို Terrence နဲ့ ခင်တော့မှ တစ်မူကွဲအဖြစ် မြင်ရတာပါ။
သူတို့ ဘုရားကျောင်းမှာ ကြက်တောင်ကွင်းလည်း ရှိတာမို့ အဲဒီ့မှာ ကြက်တောင်လည်း ရိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကြက်တောင်ရိုက်တာကိုတော့ အတော်သဘောကျသားဗျ။ ခက်တာက အိမ်က ဘက်တံဝေးစွ၊ ကြက်တောင်တောင် ၀ယ်ပေးဖို့ အနိုင်နိုင်ဆိုတော့လည်း သည်လိုပဲ အိယောင်ဝါး ၀င်ရိုက်ခဲ့ဖူးတာလောက်နဲ့ပဲ ကြက်တောင် ကိစ္စ နိဋ္ဌိတံပါတယ်။
အဖေက ထီကလေးလည်း ပေါက်ထားတော့ လောပိတမှာတုန်းက ထဲနစ်(စ်) ရိုက်လိုက်သေးတယ်။ အရာရှိတွေကြားက ထဲနစ်(စ်)ရိုက်သော စာရေးပေါ့။
ရန်ကုန်ရောက်တော့ အဲဒါတွေ သူလည်း ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။
Terrence နဲ့က တစ်ကျောင်းတည်းလည်း ဖြစ်ပေမယ့် တန်းခွဲ မတူဘူး။ သူ့ကို ကျွန်တော် တော်တော် ခင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်တော့လည်း အလိုလို အနေဝေးသွားတော့တာပဲ။ ဆယ်တန်းအထိ တွေ့ရင် ပြုံးပြ၊ နှုတ်ဆက်၊ ပြောင်နောက်လောက်နဲ့ပဲ ပြီးသွားတယ်။
တစ်ထည် ဆယ်ပြား လက်ခစား
လမ်း ၄၀ မှာ နေခဲ့တဲ့ဘ၀မှာ အမှတ်ရစရာ တစ်ခုက အပ်ချုပ်ပြီး ပိုက်ဆံရှာခဲ့တာ။
အဲဒါက တရုတ်တွေ နေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာမို့ အလိုလို ဖြစ်လာတာပါ။ ဘာခေါ်မှန်း မသိဘူးဗျာ။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အင်္ကျီ ရင်ဘတ်နေရာမှာ လက်မ၀က် မရှိတရှိလောက် ဖောင်းကြွလေးတွေ ပုံဖော်ပြီး ၀တ်ကြတာ။ ပိတ်စကိုပဲ ဖောင်းဖောင်း အိတ်ကလေးတွေလို ဖြစ်နေအောင် လုပ်ထားတာဗျာ။ ပုံနဲ့ ပြချင်ပေမယ့် ဘိုလို ဘယ်လိုခေါ်မှန်း မသိတာမို့ မရှာတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
သူက ချုပ်ရတာသာ လက်ဝင်တာ၊ တကယ်က ဘာမှ မခက်ဘူး။ ပိတ်စတွေ ရောက်လာတယ်။ ပြီးတော့ ခဲတံနဲ့ မှတ်သားဖို့ ကတ်ထူပြား တစ်ပြား ပါတယ်။ ကတ်ထူပြားမှာ အပေါက်ကလေးတွေ ဖေက်ထားတယ်။ ပိတ်စကို ပြန့်နေအာင် ဖြန့်ပြီး ကတ်ထူပြားကို အပေါ်က ထပ်၊ ပြီးရင် ခဲတံတစ်ချောင်းနဲ့ ပိတ်စပေါ်မှ အပေါက်အတိုင်း အစက်ကလေးတွေ ချလိုက်။ စုစုပေါင်း အစက် ၁၀၀ လောက် ရှိမယ် ထင်တယ်။
ရပြီဆိုရင် အပ်ချည်နဲ့ အပ်ကို သုံးပြီး အစက်တွေကို တစောင်း(ထင်တယ်) လိုက်ဆက်ပြီး သီလိုက်ရုံပဲ။ အားလုံး ပြီးသွားတဲ့အခါ အပ်ချည်နဲ့ မသီတဲ့ဘက်မှာ အဲဒီ့ဖောင်းဖောင်းလေးတွေ ပုံပေါ်ပါပြီ။
အဲဒါ လုပ်ရင် လုပ်ခက တစ်တည်ကို ဆယ်ပြားရတယ်။ ငါးထည်ပြီးရင် ငါးမူးရတာပေါ့။ ဆယ်ထည်ပြီးရင် တစ်ကျပ်ရတာပေါ့။
ဘယ်သူက စတင်သယ်ဆောင်လာတာလဲတော့ မမှတ်မိဘူး။ အဲဒီ့တစ်လောမှာ ကျွန်တော်တို့ အိမ်နီးချင်း တချို့ အဲဒါတွေ သီကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပါတာပေါ့။ ငါးမူး၊ ပြား ခြောက်ဆယ်ရတော့လည်း ပျော်ပြီးတော့ လုပ်တာပေါ့။
ဒါပေမယ့် အဲသလို လက်မှုအလုပ်က လက်ဆီခြေဆီ အလွန်သန်တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က သိပ်အံမကျဘူး။ အာရုံ စိုက်လိုက်တာနဲ့ လက်ဆီက အ၀တ်ကို ရေညှစ်လိုက်သလို ပေါက်ပေါက်ကျလာတတ်တာကိုး။
ဒါလည်း တစ်နေရာမှာ ရေးပြီးပါပြီ။ စာမေးပွဲဖြေတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် အေးတဲ့ ရာသီဖြစ်ဖြစ် လက်ဆီက တရားလွန်ထွက်တာ။ စာရေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့် လက်ဖနောင့်အောက်မှာ လက်ကိုင်ပ၀ါ ခံထားရတယ်။ ခြေဆီဆိုလည်း ရွှဲနေအောင် ထွက်တာ။ ဒါ့ကြောင့် အခုနောက်ပိုင်း အပြင်သွားတဲ့အခါ ကျွန်တော် ဘောင်းဘီနဲ့ ခြေနင်းကို မချွတ်တမ်း ၀တ်တော့တာပါပဲ။ မဟုတ်ရင် ကျွန်တော့်ခြေဆီနဲ့ လမ်းပေါ်က ဖုတ်နဲ့ ရောပြီး ခြေထောက်မှာ ရွှံ့တွေလူးထားသလို ဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။
အသားနာတာကို မအော်ရ၊ မငိုရဆိုပြီး ဇွတ်နှိပ်ကွပ်ခဲ့တဲ့ ဒဏ်၊ အဖေက အမေ့ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက် ညှဉ်းပမ်းနေတာကို အသံမထွက်ဘဲ ကြိတ်ရှိုက်ရင်း တစ်သက်လုံး မြင်တွေ့နေခဲ့ရတဲ့ ဒဏ်တွေပဲဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော် စိတ် သိပ်လှုပ်ရှားလာပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒီ့ လက်ဆီ ခြေဆီက ထွက်လို့ ကောင်းနေဆဲပါပဲ။
လမ်း ၄၀ တိုက်ခန်းရဲ့ ဘေးမှာ မြေကွက်လပ်ရှိတဲ့အကြောင်း ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒီ့ မြေကွက်လပ်ရဲ့ တစ်ဖက်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် လေးထပ်က မိသားစုနဲ့လည်း ခင်တယ်။ အဲဒီ့မှာ ကျွန်တော်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်း ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်လည်း ရှိတယ်။ အကြီးကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဘာသိဘာသာပဲ။ အငယ်က ကျွန်တော်နဲ့ အရွယ်ချင်း ပိုနီးတော့ အတူ ကစားဖက်၊ တိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဖက်လို ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော်လုပ်တာ မှန်သမျှ အဖေ့ကို ပြန်သတင်းပို့သူက သူချည်းဖြစ်နေခဲ့တာလည်း အမှတ်တရပါပဲ။ ယုတ်စွအဆုံး အဲဒီ့ မြေကွက်လပ်ဘေးက အခန်းကို လာလာနေတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ဘာဂလိုတိုတိုဖြစ်ပြီး ပုသိမ်အထိ လိုက်သွားတော့လည်း သူက ပါလာတယ်။ လမ်းမှာ ကျွန်တော် သောက်တာ၊ မူးတာတွေ ဖြစ်တော့ အဖေ့ဆီ ပြန်သတင်းပို့တာလည်း သူပဲ။
ယုံယုံကြည်ကြည်ပေါင်းနေတဲ့သူက နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးတာ အဲဒီ့ကတည်းက ခံခဲ့ရတာလည်း တကယ့် အမှတ်တရပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်က သူနဲ့ လမ်း ၄၀ ထဲမှာပဲ ပြန်တွေ့တယ်။ အဲတုန်းက ကျွန်တော်တို့ နေခဲ့တဲ့ အိမ်နဲ့ မျက်စောင်းထိုးက ပုံနှိပ်တိုက်မှာ ကျွန်တော့် စာအုပ်တွေ ရိုက်နေတာ။ ပုံနှိပ်စက်ကို အသွားမှာ ဆုံတာပါ။
ကျွန်တော်က မျက်မှန် မတပ်တော့ဘဲ မျက်ကပ်မှန် ပြောင်းတပ်တာကြောင့်ရယ်၊ ၀တ်ပုံ မတူတော့တာရယ်ကြောင့် အဲဒီ့တုန်းက အသိတွေက ကျွန်တော့်ကို ချက်ချင်း မမှတ်မိကြဘူး။ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ မှတ်မိတယ် ထင်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ကွက် ကြည့်ကွက်လုပ်နေပေမယ့် ကျွန်တော် သူ့ကို နှုတ်မဆက်မိခဲ့တော့ဘူး။
သူ့ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ သူမှန်း သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြင်လိုက်တာနဲ့ ရင်ထဲက အနာဟောင်းက ပေါ်လာတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နှုတ်မဆက်မိတော့တာပါ။ ခွင့်မလွှတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ မုန်းလည်း မမုန်း၊ ချစ်လည်း မချစ်တာ သက်သက်။ စိတ်ထဲမှာကို မထားချင်တော့တာပါ။ အတိတ်တွေကို အတိတ်မှာပဲ ထားလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်လေ။
လမ်း ၄၀ က သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းဆိုတာတော့ အဲဒါလောက်ပါပဲ။
အဲ… ပြောဖို့ ကျန်တာက ကျွန်တော်တို့ လမ်း ၄၀ ကို ပြောင်းလာပြီး တစ်နှစ် နှစ်နှစ်လောက် အထိကတော့ ကျွန်တော် တိတ်တိတ်ကျိတ် ပြစ်မှားဖူးသူ အမှတ် ၂ အန်တီ ခင်ခင်က အိမ်ကို ၀င်ထွက်နေပါသေးတယ်။ နောက်တော့လည်း ဘာကြောင့်မှန်း မသိဘူး၊ သူနဲ့ မေမေနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားပြန်တယ်။
အန်တီသီတာ့ကိုသာ ပြန်တွေ့တာ။ အန်တီခင်ခင့်ကိုတော့ အဲလို အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပြီးနောက်ပိုင်း လုံးဝကို ပြန်မဆုံတော့ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ကြီးကောင်ဝင်စ အရွယ် စိတ်ထဲမှာ အမှတ်ထင်ထင် စွဲလန်း တပ်မက်ခဲ့ဖူးသူမို့ မေ့လို့တော့ မသွားဘူပေါ့။
ရင်မှာ တစ်ထောင်မက ချစ်ခဲ့ဖူးပါသည်
သင်္ကြန်ကာလတွေလည်း လမ်း ၄၀ ငယ်ဘ၀မှာ ဖြတ်သန်းဖူးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လမ်းရဲ့ ရေပက်မဏ္ဍာပ်က ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထိပ်မှာ ရှိတယ်။ အဲဒီ့ကို သွား၊ ရေပက်တာပေါ့။ အဓိကကတော့ နို့ဆီခွက်တစ်လုံးနဲ့ ခွက်စောင်း ခုတ်တာပါ။ တော်တော် အလုပ်မဟုတ်တာဗျ။ ရေပက်တာ မဟုတ်ဘဲ တစ်ဖက်သားကို အနာတရဖြစ်အောင် လုပ်တာသက်သက်ပဲ။ အားသန်သန်နဲ့ ခွက်စောင်း ခုတ်လိုက်ရင် ခံရသူမှာ ကော့နေအောင် ခံရတာ၊ စပ်တာရော၊ နာတာရောပေါ့။ အဲဒါကို ဘာသဘောကျတယ် မသိဘူး၊ လုပ်ကြတာပဲ။
အိမ်ဘေးအိမ်က အစ်မကြီးကလည်း အဲဒီ့မဏ္ဍာပ်မှာ ရေကစားတော့ သူ့ကို ငမ်းရတာလည်း အရသာတစ်ခုပေါ့။ သူကလည်း သူ့ကိုယ်သူ လှမှန်းသိ၊ လူတကာက ငေးရမှန်း သိတော့ လူလုံးပြလို့ ကောင်းနေခဲ့မှာပေါ့။
ကျွန်တော်သူ့ကို ရည်းစားစာပေးတုန်းက ၁၉၇၀ မှာပါ။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်ကျမှ သူ့ဆီက အဖြေတောင်းမယ်လို့တောင် ခပ်တည်တည်နဲ့ ကြေညာချက် ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သို့သော် ၁၉၇၅ ကျတော့ သူလည်း ကျွန်တော်တို့ အိမ်ဘေးက ပြောင်းသွားပြီ။ ကျွန်တော်လည်း ကြားထဲမှာ နောက်ထပ် ဆယ်ယောက်လောက် ပြောင်းကြိုက်ပြီးနေပြီ။ သူ့ကိုလည်း မေ့သွားပါပြီ။ တော်တယ်နော်။ ကျွန်တော့် အချစ်ဆိုတာ အဲလိုဗျ။ 😀
ရှစ်တန်းလောက် ရောက်တော့ ရန်ကုန်ရည်က အတော်လည်နေပြီ။ ကျွန်တော် ရှစ်တန်းနှစ်မှာ အဘွားဆုံးတယ်။ အဲဒီ့နောက် မကြာဘူး၊ အစိုးရက မဲစနစ်နဲ့ ရောင်းပေးတဲ့ မာဇဒါ ဘီ ၆၀၀ လေးဘီးကားကို အဖေတို့ လျှောက်လွှာတင်ပြီး မဲသွားနှိုက်တာ ပေါက်လာတယ်ဗျ။ လိုက်(ထ်)ဗှယ်(န်)ကို ကျပ် နှစ်သောင်း၊ ဗှ်(န်) [ပစ်ခပ်(ပ်)]ကို ကျပ်တစ်သောင်းရှစ်ထောင်နဲ့ ရောင်းပေးတာပါ။ ခက်တာက မဲသာပေါက်တယ်။ ကားက အဆင်သင့် မရှိသေးဘူး။ စောစောပိုင်း မဲပေါက်သူတွေပဲ ရလိုက်ပြီး အဖေတို့က ထိုင်စောင့်ရတယ်။
ကောင်းတော့ ကောင်းသွားတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ပထမပိုင်း ပေါက်သူတွေက ဇကွဲနံပါတ် ငါးထောင်ကျော်တွေ ရတယ်။ သူတို့ရတဲ့ ကားတွေက ညာမောင်းယာဉ်တွေ၊ ပြီးတော့ ဟဲ(န်)(ဒ်)ဂီယာလို့ ခေါ်တဲ့ စတီယာရင်ရဲ့ နောက်နားလေးတွင် ကပ်နေတဲ့ မောင်းတံနဲ့ ဂီယာထိုးရတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
အဖေက ကား ရလာရင် အငှားယာဉ်မောင်းစားမယ်ဆိုတဲ့ အကြံနဲ့ သူ့ရုံးကနေ ဆေးပင်စင်ယူဖို့ စတင် ပြင်ဆင်နေပါပြီ။
အဲဒီ့ ရှစ်တန်းနှစ်မှာ ထူးခြားတာက ဘိုနီရယ်လို့ ကျွန်တော့် ချစ်သူ့ရင်ခွင်ရှာပုံတော်မှာ တစ်လျှောက်လုံး ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး ကျွန်တော့်ဘ၀ထဲ ရောက်လာတာပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ ခုနစ်တန်း၊ ရှစ်တန်းမှာ ကျူရှင်ခေတ်အစအဦးပါ။ လူတိုင်း ကျူရှင် မယူကြသေးဘူး။ ယူစရာ မလိုအောင်လည်း ကျောင်းက ဆရာ ဆရာမတွေက အသင်အပြ ကောင်းတယ်၊ စေတနာတွေလည်း ပါကြတယ်။ ကျောင်းက ဆရာ၊ ဆရာမဆီမှာ ကျူရှင် ယူတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မကြားဖူးသေးတဲ့ ခေတ်ပေါ့။
ရန်ကုန်ကျူရှင်လောကရဲ့ ဖခင်ကြီးတွေကတော့ လှည်းတန်းက နာမည်မေ့နေတဲ့ ရူပဗေဒဆရာ တစ်ယောက်ရယ်၊ မြေနီကုန်းက သင်္ချာဆရာ ဦးဦးသာရယ်၊ ရန်ကုန်မြို့လယ်က အင်္ဂလိပ်စာဆရာ ဦးတင်မြင့်လှိုင်ရယ်ပါပဲ။
နာမည်ကျော် ဆရာဦးသာနိုး (စာရေးဆရာ မောင်သာနိုး)လည်း ကျူရှင် ဖွင့်ထားပေမယ့် သူက လွတ်လပ်တယ်။ ကျောင်းလခ ပေးရင် ယူလိုက်တယ်။ မပေးလည်း ဘာမှ မပြောဘူး။ တက်ချင် တက်လို့ ရတယ်။
ဦးသာနိုးက မေမေ့ထက် ငယ်ပေမယ့် မေမေ့ဆရာလည်း ဖြစ်ဖူးတယ်။ မေမေက အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ဆယ်တန်းကျခဲ့တာမို့ ဆရာဦးသာနိုးဆီမှာ တက်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပဲ။ ရွှေကျီးမြင်ဘုရား စောင်းတန်းထဲမှာဆိုလား၊ ဇရပ်မှာဆိုလားပဲ ဆရာနိုးက အခမဲ့ သင်ပေးတာပါတဲ့။
အဲတော့ မေမေက ဆရာနိုးဆီမှာ တက်မှ ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်စာ တတ်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုးတန်း၊ ဆယ်တန်းကိုမှ သင်ပေးနေတဲ့ ဆရာနိုးထံပါးမှာ ကျွန်တော့်ကို သွားအပ်တယ်။ ဆရာက တက်ချင်လည်း လာတက်လေဆိုတာနဲ့ပဲ ကိုတန်းသင်တန်းကို ရှစ်တန်းနဲ့ သွားတက်ခဲ့ရပါသော်ကောဗျာ။
နောက်ပြီးတော့ နာမည်ကျော်ဆရာရဲ့ သင်တန်းမှာလည်း သွားတက်လိုက်ရသေးတယ်။ လေအေးစက်တပ် စာသင်ခန်းကို အဲတော့မှ ကြုံဖူးတာခင်ဗျ။ အဲတုန်းက အဲဒီ့ဆရာက လျှမ်းလျှမ်းတောက်။ တစ်နေ့ကို အင်္ကျီ ကြိမ်ဖန်များစွာလဲပြီး စာသင်တယ်လို့ အဆိုရှိတယ်။ အသင်အပြလည်း တကယ် ကောင်းတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ကျူရှင်မှာ ကျောင်းသားတွေက အုံးအုံးထနေတယ်။
အဲဒီ့မှာ ဘိုနီနဲ့ ဘေးချင်းကပ် နေရာရရင်းက အဲဒီ့ကောင်နဲ့ ခင်သွားတော့တာပါပဲ။ အမှန်တော့ သူ့ခမျာ ကြမ္မာ ငင်ရှာတာပါ။ ကျွန်တော်လို ခွကျကျ အောက်တန်းစားကို သူလို ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လူ့မလိုင် ရေပေါ်ဆီ အလွှာစစ်စစ်က လာတဲ့သူက ပေါင်းဖြစ်သွားအောင် ခမျာ အတော် ကံနည်းရှာတယ်။ ခုတော့လည်း သေရှာပါပြီ။ နောက် ငါးရက်နေရင် သူ မရှိတော့တာပဲ နှစ်လပြည့်တော့မယ်။
အဲဒီ့ဆရာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မှတ်မှတ်ရရ အဖြစ်တစ်ခုရှိတယ်။
အဲဒီ့အချိန်က ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်တောင် မရောက်သေးဘူး။ တော်လှန်ရေးကောင်စီလက်ထက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ကို ကူးဖို့တော့ တာစူနေပြီပေါ့။ သေချာတာကတော့ တစ်တိုင်းတစ်ပြည်လုံးမှာ အစစ အရာရာ ပါးရှားနေပြီ။ နိုင်ငံခြားဖြစ်ဆိုတာ မူးရင်တောင် ရှူစရာ အင်မတန်မှ နည်းတဲ့ခေတ်။
အဖေ့ဆီမှာက နိုင်ငံခြားက ပြန်လာသူ အင်ဂျင်နီယာမိတ်ဆွေက ပေးထားတဲ့ နိုင်ငံခြားက အသင့်ချုပ် ရှပ်အင်္ကျီ လက်တိုလေး တစ်ထည်ရှိတယ်။ အသားလည်း ကောင်းတယ်၊ အဆင်ကလည်း အဖြူနဲ့ အပြာကွက်။ အကွက် ခပ်ကြီးကြီး။
အဖေက အဲသလို အပွင့်တွေ အခက်တွေ မ၀တ်တတ်တဲ့အပြင် သူ့မှာ ခရုသင်းရောဂါ စနေပြီမို့ လက်တိုလည်း မ၀တ်တော့ဘူး။ အဲတော့ အဲဒီ့ အင်္ကျီကို ဆိုင်မှာ သွားပြင်လိုက်ပြီး ကျွန်တော် ၀တ်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး နိုင်ငံခြားဖြစ် အင်္ကျီလေးပေါ့။
တစ်ရက်မှာ အဲဒါလေး ၀တ်ပြီး ဟိုဆရာရဲ့ ကျူရှင်ကို သွားတက်မိတယ်ဗျ။ ဆရာက မင်းသားလိုနေတာ။ ကျောင်းသား စုံပြီဆိုမှ သူ့အခန်းထဲက ထွက်ပြီး စင်ပေါ်တက်လာတာ။
ဆရာလည်း ထွက်လာရော ကျွန်တော် ချက်ချင်း သတိထားမိလိုက်တယ်။ ဆရာဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီနဲ့ ကျွန်တော် ၀တ်ထားတဲ့ အင်္ကျီက တစ်ဆင်တည်း၊ တစ်သားတည်း၊ တစ်မျိုးတစ်စားတည်း ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကိုပါ။ ဆရာကလည်း စာမသင်သေးဘဲ အတန်းကို ဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ ငါးတန်းမြောက်လောက်မှာ ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ဆရာ့မျက်လုံး ရပ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ သူ့လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ မိုက်ခရိုဖုန်းကို ပြန်ချလိုက်တယ်။ အခန်းထဲ ပြန်ဝင်သွားတယ်။
ပြန်ထွက်လာတော့ သူ အင်္ကျီလဲလာတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သြော်… ဆရာရယ်လို့ပဲ စိတ်ထဲမှာ တွေးမိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဖြင့် ဆရာနဲ့ အင်္ကျီဆင်တူ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်နေလို့ ကြည်နူးမလို ရှိလိုက်ရသေးတယ်၊ ဆရာက မကြည်လင်သလိုနဲ့ အင်္ကျီဝင်လဲလိုက်တာကို မြင်ရတော့ စိတ်ထဲ အတော် မကောင်းဖြစ်သွားရသေးတယ်။
အဟဲ… အဲဒီ့ကိစ္စက အဲဒီ့နားမှာတင် မပြတ်ဘူးခင်ဗျ။ နောက်တစ်ကြိမ်ကျတော့ ဘာကြောင့်လဲ မသိဘူး၊ ကျောင်းသူလား၊ စာရေးမလား မသိ၊ တစ်ခုခု စင်ပေါ်မှာ လွဲချော်သွားတာကို တစ်တန်းလုံးက အုံးခနဲ ၀ိုင်းရယ်လိုက်ကြတယ်။ ဆရာက အဲဒီ့အချိန် စင်ပေါ်မှာ ရှိနေတယ်။
အတန်းကို ဂြိုဟ်ကြည့်ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး စိန်ခေါ်ပါရောလား။ ဟောဗျာ… ရယ်တာက တစ်တန်းလုံး။ ကျွန်တော့်ကျမှ မဲလာပေါက်နေတော့ ကျွန်တော်လည်း တော်တော် စိတ်လေသွားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ အသာခေါင်းငုံ့ခံနေလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ့နောက်တော့ အဲဒီ့သင်တန်းကို ကျွန်တော် သွားမတက်တော့ဘူး။ ကျွန်တော့်ကုသိုလ်ကံက အဲသလို ထူးတာ။
စု စုအေး အဲဒီ့ဆရာက အဲလိုကြီးလားရော
ATK အဲတုန်းက သူလည်း အတော်ငယ်သေးတာကိုး။ အလွန်ဆုံးမှ ၃၀ လောက်ပဲ ရှိဦးမယ် ထင်တယ်။ အောင်မြင်မှုကလည်း သူမတူတော့ မာန်ကလေး တလူလူနဲ့ နေမှာပေါ။ နောက်တစ်ခုက အခု ရေးပြနေသလို ဘ၀မှာ လူမသိ သူမသိတဲ့ ငယ်ဘ၀ စိတ်ဒဏ်ရာအရင့်အမာတွေက ဘယ်လို ရှိခဲ့မှန်းမှ မသိတာလေ။
Soe Myat Myo Shwe အဒေါ်တစ်ယောက်ရဲ့ သူငယ်ချင်းက အဲဒီ့ဆရာရဲ့ အများထဲက တစ်ယောက်ဆိုပြီး ငယ်ငယ်က သိခဲ့ဖူးတယ်…
Thet Chow အဲဒီလို အင်္ကျီလေးတွေ ဟိုခေတ် ကခေတ်စား ခဲ့တယ် ဗမာပြည်တုံး က Smocking လို့ခေါ်တယ် ပိတ်စဖောင်းဖောင်း လေးတွေ ဂါဝန်အပေါ်ပ်ိုင်း မှာ ချုပ်ခ ဈေးကြီးတယ်။ ဒီ US မှာတော့ Smocking fabrics လို့ မှတ်ရပါတယ်။
Alex Moe ကျူရှင်ဆရာတွေထဲမှာတော့ ဆယ်တန်းတုန်းက အင်္ဂလိပ်စာဆရာကြီး အမှတ်ရတာပဲ။ ဝမ့်အပွန်းအတိုင်းမ်း သဲဝစ်အကင်းခ် ဟီဟက်ဒ် ဂရုန်းအပ်ဒေါ့တာ အခုထိမှတ်မိသေးတယ် ဆြာရေ…
ATK ကျေးဇူးပါ Thet Mar. ဒါဆို ပုံရပါပြီ။ ဒါမျိုးလေးပေါ့။ သို့သော် သည်လောက်တော့ မလှဘူးပေါ့လေ။ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်ကိုး…
Lutha Kyaw ရူပဗေဒဆရာက ဦးအောင်ဖေညွန့်ပါ။ မတက်ဖူးပါ။
အဲဒီခတ်က ဆရာတွေက စာသင်ချင်လို့ သင်ရင်း ငွေတွေ ဝင်လာတာပါ။ ငွေရှာဖို့ သင်တာ မဟုတ်ပါ။ ကျူရှင်ခကလည်း လူအများတတ်နိုင်တဲ့ ပမာဏပါ။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်
သည်မှာ အရေးကြီးတာက ဘိုနီ ကျွန်တော့်ဘ၀ထဲ စရောက်လာတာပါပဲ။ အဲတုန်းက ဘေးချင်းကပ် ထိုင်ရင်း သိကျွမ်းလာခဲ့ကြတယ်။ သူက ကျွန်တော်တို့နဲ့ ကျောင်းမတူဘူး။ ဒဂုံ ၁ ရယ်လို့ လူသိများတဲ့ မက်သဒစ်(စ်)(ထ်) ကျောင်းက။ ကျောင်းဆင်းရင် သူ့အိမ်က ကားလာကြိုတယ်။ ကောင်ဆယ်(လ်) ကားစိမ်းကြီး။ ကားနံပါတ်တောင် ကျွန်တော် မှတ်မိနေသေးတယ်။ စ/၅၂၀၁။
ကားကို ယာဉ်မောင်းက မောင်းလာတယ်။ ကားနောက်ခန်းမှာ ပါလာတတ်တာက မျက်နှာထား တင်းတင်းနဲ့ ခန့်ခန့်ကြီး ထိုင်နေတတ်တဲ့ သူ့အဘွားက အများဆုံးပဲ။
အဲဒီ့ ရှစ်တန်းနှစ် ကုန်လုနီးမှာ အဖေတို့ ကားလည်း ထုတ်လို့ ရလာပါပြီ။ ဘယ်မောင်း ဘော(လ်)ဂီယာနဲ့ ကားပေါ့။ အဲတော့ အဖေကလည်း တစ်ခါတစ်လေ ကားနဲ့ လာကြိုပေးတယ်။
ကားသစ်ကလေးပေါ့။ ဘ၀မှာ အဲဒီ့တစ်ခါပဲ အသစ်ကျပ်ချွတ်ကားကို စီးဖူးပါတယ်။ အဲတုန်းက အကုန် အပြည့်အစုံပါသေးတယ်ဗျ။ လက်စွဲစာအုပ်၊ ဂွတွေ၊ ပလာယာတွေ၊ ၀က်အူလှည့်တွေ ပါတဲ့ အထုပ်ကလေးက တစ်ထုပ်၊ ကားဘီး ချွတ်ချင် တပ်ချင်ရင် ထောက်လို့ရတဲ့ ၀က်အူနဲ့လှည့်တင်ရတဲ့ ထောက်က တစ်လုံးစသဖြင့်ပေါ့။
အဖေကတော့ သဘောတွေ ကျလို့။ သူ့ကားကို သူ့မယား၊ သူ့သားထက်တောင် တန်ဖိုး ထားသေးလား မသိဘူး။ ပြီးတော့ သူက အငှားယာဉ်လိုက်ပါတော့တယ်။ နံပါတ်နီ တရားဝင်အငှားယာဉ် မဟုတ်ဘဲ နံပါတ်နက်နဲ့ အငှားလိုက်တာပါ။ ဘလက်(ခ်)တက္ကစီခေါ်သပေါ့။
ရုံးအလုပ်ကနေ ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြနဲ့ အငြိမ်းစား ယူလိုက်ပြီး အငှားယာဉ်မောင်းတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့လည်း အတော် ချောင်လည်လာတယ်။ ကားကိုတော့ အောက်ထပ်က ကိုအောငံတို့ အိမ်ခန်းထဲမှာ တစ်လ အစိတ်လား၊ ငါးဆယ်လား ပေးပြီး ညသိပ်တယ်။
အဲလိုနဲ့ ရှစ်တန်း အစိုးရစစ် ဖြေရပါတယ်။ တစ်ရက်မှာ အိမ်မှာ လာနေနေတဲ့ အစ်ကိုကြီးက ကျွန်တော့်ကို စာမေးပွဲခန်းထဲ ချုပ်ပြီး ပို့ပေးခဲ့ကြောင်း ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။
ကျွန်စိတ်သန်ရင် သိပ္ပံသာ ရွေး
အဲဒီ့ခေတ်က ရှစ်တန်းနှစ်မှာ ၀ိဇ္ဇာ၊ သိပံ္ပ ခွဲပါပြီ။
မသိဘူးလေ။ ကျွန်တော် ဘာမှ မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်တင် မကဘူး၊ ကျွန်တော့် မိဘတွေလည်း မသိဘူး။ သိပံ္ပမှ မြင့်တယ် ထင်ခဲ့ကြတာလား။ တစ်ပြည်လုံး ခွေးဖြစ်ကုန်အောင် ဖန်တီးပေးတဲ့ ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ ပညာရေးစနစ်သစ်ကြောင့် တက္ကသိုလ်ကို ဆယ်တန်းအောင်မှတ်နဲ့ ပိုင်းဖြတ်တာကြီးက ပေါ်ပေါက်လာတယ်။
အဲဒါကြီးရဲ့ သက်တမ်းက ကနေ့ဆို နှစ် ၆၀ ကျော်ခဲ့ပြီမို့ အမှားကြီးက တအားကြာနေပြီ။ အဲတော့ ဘုမသိ ဘမသိတွေက အဲဒါမှ အမှန်ထင်ပြီး စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးရင် တလွဲတွေ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုတဲ့ နလပြိန်းတုံး စောဒကတွေ တက်လာကြတယ်။
အမှန်က တက္ကသိုလ်တွေမှာက ၀င်ခွင့် စာမေးပွဲတွေ ထားတတ်ကြတယ်။ သူတို့ လိုချင်တဲ့ အဆင့်မီမှ သူတို့ တက္ကသိုလ်ကို ၀င်ခွင့်ပေးတာ။ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရထားတဲ့ တက္ကသိုလ်တိုင်းဟာ ကိုယ့်တက္ကသိုလ်ကို နာမည်အပျက်မခံချင်ကြသူချည်းပဲ။
နောက်တစ်ချက်က ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ ပညာရေးစနစ် မတိုင်ခင်က စနစ်ကို မသိကြ၊ မကြားဖူးကြတာ။
အဲတုန်းက တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်ရင် အင်တာဆိုပြီး Intermediate အဆင့် (တက္ကသိုလ် အကြိုတန်း ခေါ်ရင် ကောင်းမယ်မှတ်တယ်) ကို နှစ်နှစ် တက်ရတယ်။ တက်တဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ကြိုက် ဘာသာတွဲတွေ ယူကြရတယ်။ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်သူက ဇီဝဗေဒ ဘာသာတွဲကို ယူထားတယ်။ အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ချင်သူက ရူပဗေဒတို့၊ ဓာတုဗေဒတို့လို ဘာသာတွဲကို ယူထားတယ်။ ဥပဒေပညာကို သင်ချင်သူတွေက ၀ိဇ္ဇာ ဘာသာတွေထဲက အတွဲတွေကို ယူထားတယ်။
နှစ်နှစ်နေပြီးမှ ဘယ်ကျောင်းဆက်တက်မယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်တယ်။ ကောင်းတာက တက္ကသိုလ် သဘောကို နှစ်နှစ်တက်ပြီးရင် နောသွားပြီ။ ဘာသာရပ်တွေရဲ့ အခြေခံကိုလည်း သင်ခဲ့ပြီးပြီ။ အရွယ်ကလည်း တက္ကသိုလ် ၀င်တန်းအောင်ခါစလို ၁၆ နှစ် ၁၇ နှစ် ဘုမသိ ဘမသိအရွယ် မဟုတ်တော့ဘူး။ ၁၈-၁၉ ဆိုတော့ နည်းနည်း ပိုတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာပြီ။ သည်အခါကျမှ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်မယ့် လမ်းကြောင်းကို ဆယ်တန်း အောင်ခါစတုန်းကလို ကမူးရှူးထိုး မဟုတ်ဘဲ ကျကျနန ရွေးချယ်ခြင်းက ပိုကောင်းခဲ့တယ်။
နောက်တစ်ချက်က ဆေးကျောင်းတက်တိုင်းလည်း အောင်တာမှ မဟုတ်တာ။ အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းက လွင့်လာတဲ့သူ၊ ဆေးကျောင်းက လွင့်လာတဲ့သူတွေ အဲဒီ့ခေတ်မှာလည်း ရှိနေခဲ့တာပဲ။
တကယ် အတတ်သင်ပေးတဲ့ ကျောင်းသာ ဖြစ်၊ ဘယ်ကျောင်းမှာမှ အိယောင်ဝါးတွေ၊ တလွဲတွေ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် တက်ပြီး ဘွဲ့ရသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။
အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ စိတ်ကြိုက်ရွေးခွင့်ရတဲ့အတွက် အတော်ဆုံးသူတွေဟာ ဆေးကျောင်းနဲ့ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းတွေမှာတင် သွားစုမနေတော့ဘူး။ ၀ိဇ္ဇာပညာမှာလည်း အတော်ဆုံးတွေ စုနေတယ်။
ပြောရတာ အားနာပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အမှန်မို့ ပြောပါရစေ။ ကနေ့ အသက် ၆၀ တန်းအထိ ရှိနေကြတဲ့သူတွေထဲမှာ ၀ိဇ္ဇာဌာနတွေမှာ အဆင့်ဘယ်လောက်မြင့်တဲ့ ဆရာ ရာထူးကိုပဲ ယူထားပါစေ၊ ဆယ်တန်းတုန်းက အမှတ် ၃၀၀ ၀န်းကျင်နဲ့ အောင်တဲ့သူတွေသာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အထက်မြက်ဆုံးတွေက ၀ိဇ္ဇာဘာသာတွဲတွေဆီမှာ ရှိမနေပါဘူး။
တိုင်းပြည် မြောင်းထဲ ရောက်ခြင်းမှာ အဲဒီ့သိပ္ပံကို သိပ်မဲတင်းခဲ့တာလည်း ပါတယ်။
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ အဓိက မဏ္ဍိုင်သုံးရပ်က အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးနဲ့ တရားဥပဒေပြုရေးပဲ။ အဲဒီ့ဟာတွေထဲမှာ ဘယ်မတုံး သိပ္ပံ။ နောက်ပြီးတော့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကို ဖွံ့ဖြိုးအောင် မောင်းနှင်ပေးနိုင်တဲ့ လောင်စာက စီးပွားရေး။ စီးပွားရေး ပညာကရော သိပ္ပံလားဗျာ။
အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ တရားဥပဒေပြုရေး၊ စီးပွားရေးဆိုတာ ပုံသေကားကျမဟုတ်ဘူး၊ ပုံသေနည်းနဲ့ တွက်ရတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အသေမဟုတ်ဘူး၊ အရှင်။ တစ်နည်းပြောရင် ဉာဏ်ကို လွှာသုံးရတာ။ ဆင်ခြင်တုံတရားက အရေးကြီးတယ်။ အဲဒီ့ ဆင်ခြင်တုံတရားကို ၀ိဇ္ဇာကမှသာ ပျိုးထောင်ပေးနိုင်တာကလား။ သိပ္ပံကတော့ ဟိုက်ဒြိုဂျင်နှစ်ဆနဲ့ အောက်စီဂျင်တစ်ဆ ပေါင်းရင် ရေဖြစ်တယ်လို့သာ နားလည်မှာပဲ။
ပါရဂူဘွဲ့အထိ ရလာမှ သိပ္ပံက ဆင်ခြင်တုံတရားဘက် ပြန်ကူးလာတာ။ ရိုးရိုးဘွဲ့၊ မဟာဘွဲ့လောက်မှာတော့ သိပ္ပံသမားက အရာရာကို ပုံသေနည်းနဲ့ တွက်ချင်နေမိတုန်းရယ်။
ဝေးဝေးမပြောနဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ တက္ကသိုလ်တက်တော့ ရူပဗေဒမှာ သဒ္ဒါမရှိဘူးဆိုတဲ့ ဆိုရိုးကို ပြောနေတာ ကြားရတယ်။ ဘာသာ စကားဆိုတာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကိုတောင်မှ သိပ္ပံသမားဖြစ်သွားတာနဲ့ အခြောက်တိုက် မာန်တက်ပြီး ပစ်ပယ်ချင်သွားကြတော့တာကလား။
အကျိုးဆက်က ဘာတုံး၊ နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ်တွေမှာတောင် ဆရာလုပ်နေတဲ့ သိပ္ပံသမားတချို့ဟာ သူတို့နဲ့ မဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ရေးပြီဆို စာလုံးပေါင်းလည်း အလွဲ၊ အသံထွက် အမှတ်မှားပြီး ပြောချင်တာက တခြား၊ ဝေါဟာရက အမှားဖြစ်လိုဖြစ်၊ သဒ္ဒါလည်း မမှန်နဲ့ ထင်ရာစိုင်းနေကြတော့တာ တွေ့နေရတော့တာပါပဲဗျား။
နှစ် ၆၀ လောက် သိပ္ပံကိုပဲ မဲတင်းပြီး ၀ိဇ္ဇာကို ပစ်ပယ်ခဲ့၊ ဥပဒေပညာကိုလည်း ပစ္စလက္ခ လုပ်ပစ်ခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်ကြောင့် အခု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မဏ္ဍိုင်သုံးရပ်မှာ ဘယ်သူတွေက မင်းမူပြီး ဘယ်သူတွေက ချာတူးနေတယ်ဆိုတာ တစ်ပြည်လုံးအသိမို့ စာမဖွဲ့တော့ပါဘူး။
စင်္ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှာဆိုရင် နှစ်သက်ရာ သိပ္ပံဘာသာတွဲကို ဘယ်နိုင်ငံခြားသားမဆို တက်ခွင့်ပေးထားတယ်။ ဒါပေသည့် ၀ိဇ္ဇာဘာသာတွေကိုကျတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားသာ တက်ခွင့်ရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားသားကို တက်ခွင့်မပေးဘူးဗျ။
ဘာလို့တုံး။ သာမန် သိပ္ပံဘွဲ့ရတွေ၊ မဟာဘွဲ့လောက်အထိ ရထားသူတွေဟာ ခိုင်းကောင်းတဲ့ ကျွန်တွေ ဖြစ်လာမှာလေ။ အလွန်ဆုံးမှ လခကြီးကြီး ပေးရုံပေါ့။ သခင်ဖြစ်လာဖို့က အလားအလာ အင်မတန် နည်းတယ်။ ၀ိဇ္ဇာသမားကကျတော့ သခင်တွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေ ဖြစ်လာမှာ။ စောစောက သိပ္ပံသမားတွေကို ခိုင်းစားမယ့်သူတွေဆိုတာ သေချာနေလို့ပဲ။
အမြော်အမြင်ဆိုတာ အဲဒါကို ခေါ်တယ်။
ကျွန်တော်လည်း အဲဒါကို မြင်လာတာ ဆယ်နှစ်တန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ တစ်ပြည်လုံးက သိပ္ပံ၊ သိပ္ပံဆိုတာနဲ့ ယောင်တောင် ပေါင်တောင် လိုက်ပံလိုက်တာများ သုံးစားလို့ မရတဲ့ သိပ္ပံဘွဲ့ဆိုတဲ့ စက္ကူစုတ်လေးတစ်ရွက်သာ အဖတ်တင်ပါတယ်ဗျာ။
၀မ်းသာစရာ ကောင်းတာက ပညာရေးစနစ် အကောင်းစား၊ အမြတ်စားကြီးရဲ့ စောင်မမှုကြောင့် ဘာတစ်လုံးမှ မတတ်ဘဲ စက္ကူစုတ်ကလေး ရလာတာပါပဲ။ အတန်းတောင် တစ်နှစ်လုံးမှ သုံးချိန်လား တက်ခဲ့ပေမယ့် ဘွဲ့ကတော့ ရလာတာပေါ့။ မောင်မင်းကြီးသားများ စေတနာကြီးတော်မူကြပါပေတယ်။
ကံကောင်းတာက အဲလို အတန်းမတက်ခဲ့၊ သိပ္ပံပညာမတတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်မှာ သိပ္ပံတွေးတွေ သိပ်မရှိဘူး။ ကျွန်တော် ပထမဆုံး ၀င်စားနေခဲ့မိတာက ဘာသာစကား။ နောက်တော့ ဥပဒေပညာ သင်ခွင့်ရလာတယ်။
ထားပါတော့… အဲဒါ နောက်မှ ဆက်ရေးတော့မယ်။ ကြားထဲက ဖောက်ထွက်သွားတာ နည်းနည်း လက်လွန်သွားပြီ။
ရှစ်တန်းအောင်စာရင်းထွက်တော့ ကျွန်တော်လည်း သိပ္ပံတွဲပဲ ရတာပေါ့။ အဲတော့ ကျောင်းလည်း ပြောင်းစရာ မလိုဘဲ အထက ၆ ဗိုလ်တထောင်မှာပဲ ကိုတန်း ဆက်တက်ရပါတော့တယ်။
ကိုးတန်းကျတော့ ကျူရှင်တွေ ယူပါတော့တယ်။ အဲဒီ့မှာ ဘိုနီနဲ့ ရေစက်က အတော်ကြီးလာတော့တာပါပဲ။
ရူပဗေဒကို ဆရာဦးထွန်းဦးကျော်ဆီမှာ ကျွန်တော်က သွားအပ်တယ်ဗျာ။ တကယ်လည်း စတက်ရော သင်းက ကျွန်တော်နဲ့ တစ်တန်းတည်း လာဖြစ်နေတယ်။ တိုင်ပင်ပြီး အပ်ကြတာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့။ ဓာတုဗေဒကျတော့လည်း ဆရာ မြတ်ထိန်လင်းဆီ သွားပြန်တယ်။ တစ်တန်းတည်း ဖြစ်နေပြန်တယ်။ ဇီဝဗေဒတော့ ဦးမြမော်။ သင်္ချာကိုတော့ နာမည်ကျော် ကျူရှင်ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ကျောင်းစာရေး ဘ၀ကနေ ဟိုဆရာ့ နည်းတွေနဲ့ လုပ်စား အောင်မြင်လာသူတစ်ယောက်ဆီမှာ သွားတက်လိုက်တယ်။ အဲဒါကျတော့ ဘိုနီ ပါမလာတော့ဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာကတော့ ကျွန်တော်က ဆရာနိုးဆီမှာပဲ အစဉ်အလာမပျက်ပြန်တော့ သူနဲ့ မတူပြန်ဘူး။
သို့သော် ဘာသာရပ် ခြောက်ခုမှ သုံးခုမှာ အတူတူဆိုတော့ သူနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က အမြဲဆုံဖြစ်တယ်။ တော်တော်ကြီးကို ပြောမနာ ဆိုမနာ ခင်မင်လာကြပါတော့တယ်။
ဘိုနီဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုမှာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါခဲ့ပါတယ်။
သူ့အိမ်ကို ကျွန်တော် ၀င်ထွက်သွားလာတတ်တယ်။ လမ်း ၄၀ ထိပ်ကို ထွက်လိုက်ပြီး ၁၂ ကား တက်စီးလိုက်၊ ဆယ်ပြားပေးရင် သူ့အိမ်နားဆီ ရောက်သွားတော့တာကိုး။
အဖေက သူနဲ့ပေါင်းတာကို သိပ်သဘောမကျဘူး။ သူဌေးသားနဲ့ ပေါင်းပြီး အောက်ခြေလွတ်မယ်၊ ပျက်စီးမယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်သူဌေးသား သူငယ်ချင်းခမျာလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲ ဘိုင်ကောင်ပါ။ သူ့အိမ်က ချမ်းသာလှပေမယ့် သွားတဲ့နေရာ၊ စားတဲ့နေရာမှာသာ အပျံစား ထားပေးတာ။ မုန့်ဖိုးလည်း များများစားစား မပေးတဲ့အပြင် အ၀တ်တောင် သိပ်ကောင်းကောင်းကန်းကန်း ဆင်တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အဲတော့လည်း ကျွန်တော်တို့မှာ နှစ်ယောက်ပေါင်းမှ ငါးမူး၊ တစ်ကျပ်နဲ့ စခန်းသွားနေခဲ့ကြတာပါ။
သူက ဒဂုံ ၁ ကျောင်းသားဆိုတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မိန်းကလေးတွေနဲ့ လက်ပွန်းတတီး နေခဲ့တာ တစ်လျှောက်လုံး။ ကြီးကောင်ဝင်တော့လည်း မိန်းကလေးတွေနဲ့ အတူပဲဆိုတော့ သူ့အတွက် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဆိုတာ အထူးအဆန်း မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်ကျတော့ ကြီးကောင်စ၀င်ကတည်းက ယောက်ျားလေးတွေချည်း ထားတဲ့ ကျောင်းမှာ နေခဲ့ရတာဆိုတော့ မိန်းကလေးဆိုတာကို ကိုယ်နဲ့ မတူတဲ့ တခြားကမ္ဘာသားလို မြင်နေခဲ့တာ။
သည်ကောင်က အဲဒီ့အချိန်မှာ ဟိုတစ်ယောက်ကို ကြောင်၊ သည်တစ်ယောက်ကို ညှော် လုပ်လို့ကောင်းနေပြီ။ ကျွန်တော်လည်း ညှော်ချင်တာပေါ့။ ကြောင်တာကတော့ မြင်သမျှ အကုန်ကြောင်တာပါပဲ။ ဒါပေသည့် သူ့လို ညှော်လို့ မရဘူး။ နီးနီးစပ်စပ်မှ မရှိတာကိုး။ ကျူရှင်မှာ တွေ့သမျှ မိန်းကလေး၊ နည်းနည်း ကြည့်ကောင်းရင်ပဲ ကျွန်တော့်မှာ ကြောင်လို့ ကောင်းနေပြီ။ အတော်ဆိုးတဲ့ ဘ၀ဗျ။ ပြန်တွေးရင်းတောင် မျက်ရည်လည်လာတယ်။ အဟုတ်ပြောတာ။
အဲဒီ့အရွယ်ဆိုတာ ပြန်မှ မရနိုင်တော့တာကိုးလေဗျာ။ 😥
သူက တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးလည်း အိမ်မှာ အပိုင်စား ရှိနေတော့ ညှော်လို့ သိပ်ကောင်းနေတာပေါ့။ ကျွန်တော့်မှာသာ သူ့အားကျပြီး ကျိတ်မနိုင် ခဲမရတွေ ဖြစ်နေတာကလား။
အဲ… ကြားထဲမှာ တစ်ခုကျန်ခဲ့တယ်။
ရှစ်တန်းနှစ်မှာ ကျန်ခဲ့တာ။ အဲဒီ့ ရှစ်တန်းမှာ အတန်းဖော်တွေထဲက နှစ်ယောက်နဲ့ တော်တော် ပေါင်းဖြစ်တာ။ တစ်ယောက်က ၄၅ လမ်း အထက်လမ်းမှာပဲ နေတယ်။ သူက ဂစ်တာကို အဲဒီ့အချိန်မှာ အသည်းအသန် တီးနေပြီ။ အဲတော့ သူ့အိမ် သွားသွားပြီး သူ့ဂစ်တာ တီးရတာ။ တော်တော်တော့ လုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့မိသားစုကလည်း ကျွန်တော့်ကို ခင်ခင်မင်မင် ဖော်ဖော်ရွေရွေ ဆက်ဆံပါတယ်။ သူ့အစ်မတစ်ယောက်က ဆေးကျောင်းတက်နေတယ်။ နောက် သူ့မှာ နှမလေး တစ်ယောက် ရှိတယ်။ သူက အလတ်ပေမယ့် သားယောက်ျားလေး တစ်ယောက်တည်း ပါတာမို့ သူ့အမေက သူ့ကို တော်တော်ချစ်ပုံပဲ။
သူက ပုံမှန်အားဖြင့် အနေအေးပေမယ့် ဆံပင်ရှည်ရှည်၊ အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဂစ်တာတော့ အပီတီးတာပဲ။
နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ အသားဖြူဖြူ အရပ်မြင့်မြင့် မျက်လုံးညိုညိုနဲ့ မူစလင်ဘာသာဝင်။ သူ့အဖေက ရေတပ်က ဗိုလ်မှူး။ သူကကျတော့ စပါ့(ခ်)(စ်)လမ်းမှာ နေတာ။ သူ့အိမ်လည်း သည်လိုပဲ ၀င်ထွက်သွားလာပေါ့။
သူက နည်းနည်း ပိုအရေးကြီးတယ်။ သူကလည်း ကြောင်လို့ ကောင်းနေတဲ့အချိန်။
နောက်တစ်ခုက သူက ခေတ်ပေါ်ထက် မြန်မာဂီတဘက်ကို အားသန်တယ်။ သူ့နှမက အကအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့မှာ ပါတယ်။ သူကြောင်နေတာက အဲဒီ့အကအဖွဲ့ထဲက ကရင်မချောချောလေး တစ်ယောက်ကို။ ကျွန်တော်လည်း သူနဲ့ ပါသွားရင်းက ကြောင်စရာ တစ်ယောက် တွေ့သွားတယ်။
ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတန်းတူပဲ။ အဲတော့ အရွယ်ချင်းလည်း မတိမ်းမယိမ်းပဲ။ အဲဒီ့တစ်ယောက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေက ကျွန်တော် ယနေ့အထိ မြင်ဖူးသမျှ မိန်းကလေးတွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေထဲမှာ စွဲမက်စရာ အကောင်းဆုံးပဲ။ နှင်းဆီ ပွင့်ဖတ်လှလှလေးတွေလိုပဲလို့သာ တင်စားတတ်ပါတယ်။ ရေးရင်းနဲ့တောင် ပြန် မြင်ယောင်မိသေးတယ်ဗျ။
သူကလည်း အကအဖွဲ့ထဲမှာပါတယ်။ အဲဒီ့နှစ်သင်္ကြန်ကျတော့ ကျွန်တော်က ဆောက်လုပ်ရေး မဏ္ဍာပ်တို့၊ လိပ်ခုံးက ပညာရေး မဏ္ဍာပ်တို့ကို ရောက်သွားပြီ။ အဲဒီ့ အကအဖွဲ့နောက်ကို သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ လိုက်ရင်း ကြောင်တော့တာပ။ ဟို ပွင့်ဖတ် နှုတ်ခမ်းရှင်လေးကို တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီး တစိမ့်စိမ့်ကြည့်တဲ့ အလုပ် လုပ်ရတာပေါ့ဗျာ။ ရေကလေး ဘာလေးလည်း လောင်းပေါ့။ ဟိုကလည်း ရှက်ပေါ့။ သည်လောက်ပါပဲ။ စကားတောင် သုံးခွန်းပြည့်အောင် မပြောဖူးဘူး။
သူ့အိမ်အထိတောင် ကျွန်တော်တစ်ကောင် ယောင်ကြောင်ပေါင်ကြောင်နဲ့ သွားလည်တာ ပါသေးတယ်။ ဟိုသူငယ်ချင်းက လိုက်ပို့ပေးတာပါ။ သူငယ်ချင်းနဲ့က တစ်မိသားစုလုံးနဲ့ ခင်နေတော့ သူ့မိဘတွေကလည်း အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ ကျွန်တော်သာ မအေးမဆေး၊ မနေတတ် မထိုင်တတ်နဲ့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိဘဲ ဆုတ်ပြန်ခဲ့တာ။
ကိုးတန်းနှစ်အထိ အဲဒီ့ဇာတ်လမ်းက မဆက်ပါဘူး။ မဆက်ဆို ဟိုမောင်မင်းကြီးသား ကြောင်နေတဲ့ ကရင်မလေးက ယောက်ျားယူသွားတော့တာကိုး။
ဟိုကောင့်ခမျာ အကွဲတွေ သည်းလို့။ ကျွန်တော်လည်း အဖော်မရှိတော့ ပွင့်ဖတ်နှုတ်ခမ်းရှင်နဲ့ အခြောက်တိုက် ဝေးသွားပါတော့တယ်။
ဆယ်တန်းတက်တော့ သူ့ကို ပြန်သတိရလာတာနဲ့ သူ့ကျောင်းအဆင်း သွားစောင့်သေးတယ်။ တွေ့တယ်ဗျာ။ သူက ကျွန်တော့်ကို မမှတ်မိဘူး။ ကျွန်တော်က ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေမို့ သူ မမြင်နိုင်တာလည်း ပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ သူက အဲဒီ့အချိန်မှာ တော်တော်လေး ၀နေတယ်။ ပုံပျက်ပန်းပျက်ကို ၀နေတာ။ ပြီးတော့ မျက်နှာမှာလည်း ၀က်ခြံအပြည့်နဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ ဖြူတဲ့သူ့မျက်နှာဟာ ၀က်ခြံအပြည့်နဲ့ နီမြန်းနေတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အသာလေး လှည့်ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က စွဲလမ်းခဲ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေတောင် ဘယ်လိုနေမှန်း သတိမထားမိခဲ့တော့ဘူး။
နောက် ငါးနှစ်၊ ခြောက်နှစ်လောက်အကြာမှာ သူ့ကို ကျောင်းထဲ (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲ) မှာ ပြန်တွေ့သေးသဗျာ။ ကျွန်တော်နဲ့ အတူပါသူ သူငယ်ချင်းတွေထဲက တစ်ယောက်က နှုတ်ဆက်နေတာပါ။ အဲဒီ့ နှုတ်ခမ်းကို ကျွန်တော် ကောင်းကောင်း မှတ်မိနေတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ့အချိန်က ကျွန်တော်တောင် ဘွဲ့ရနေပြီဆိုတော့ သူ ဟုတ်မဟုတ် မသေချာဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် နောက်ဆုံး တွေ့ခဲ့တုန်းက ကိုယ်လုံးရဲ့ ထက်ဝက်မကတောင် သွယ်နေတယ်။ မျက်နှာလေးကလည်း ဖွေးအုလို့ရယ်။ သည်အခါမှာ ပွင့်ဖတ် နှုတ်ခမ်းတွေရဲ့ အလှက ပိုပေါ်လွင်လို့ နေပါတယ်။ အဲဒီ့ နှုတ်ခမ်းကိုပဲ ငေးနေခဲ့မိတယ်။
သူနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း နှုတ်ဆက်ထွက်သွားတော့မှ နာမည်မေးမိတယ်။ သူနေတဲ့ လမ်းကိုလည်း ပြောပြတော့ သူမှ သူ စစ်စစ်ဆိုတာ လွှတ်သေချာသွားတော့တာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာကြီး ဖြစ်ကျန်ရစ်တယ်။ ထပ်တွေ့ရဖို့ ကျောင်းထဲ သွားရှာပြီး ကြိုးစားသေးပေမယ့် မတွေ့ရတော့ဘူး။ ကောက်ရိုးပုံထဲက အပ်တစ်ချောင်းပေါ့လေ။
သူ့အိမ်ကို သိပေမယ့် မသွားရဲဘူး။ ဘယ်မျက်နှာမျိုးနဲ့ ဘာအကြောင်းပြပြီး သွားရမှန်းလည်း မသိဘူးလေ။ ဟိုသူငယ်ချင်းကလည်း စစ်တက္ကသိုလ်တက်၊ လေတပ်ထဲရောက်၊ သူကြောင်ခဲ့သူနဲ့ မညားဘဲ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ ညား။
သူ့သတင်းတွေ ကြားနေပေမယ့် မတွေ့တာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသွားပြီ။ ၁၉၈၀ လောက်ဆီက မှတ်ပုံတင် ရှေ့နေသင်တန်း ၀င်ခွင့် စာမေးပွဲ ဖြေတုန်းက တစ်ခါ တွေ့လိုက်တယ်။ သူမအောင်ဘူး ထင်တယ်၊ သင်တန်း တက်တော့ သူ့ကို မတွေ့ရတော့ဘူး။
အခုတော့ အရပ်ဘက် ရောက်နေတယ်လို့ သူနဲ့အတူ လုပ်ဖူးခဲ့တဲ့ တစ်ယောက်က ပြောပြပါတယ်။ ပြောပြသူက ပုဂ္ဂလိက လေကြောင်းလိုင်းမှာ လေယာဉ်မှူးလုပ်နေပြီး ဟန်တွကျလို့။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖူးတဲ့ ခပ်ကြောင်ကြောင် အတွေးအမြင်နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ဌာနဆိုင်ရာမှာ အလတ်တန်း အရာရှိအဖြစ်နဲ့သာ ကျန်ရစ်တယ်တဲ့။
အေးပေါ့လေ… ကိုယ့်ဘ၀၊ ကိုယ့်သဘော၊ ကိုယ့်လမ်း၊ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ သူ့ဟာနဲ့သူ ကျေနပ်နေရင် ပြီးတာပါပဲလေ။
ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာတော့ သူနဲ့ ပတ်သက်လို့က အနာလေးတစ်ခု ရှိတယ်။
သည်အပိုင်းမှာ ဘယ်သူမှ ဘာမှ မပြောကြတာ စိတ်မကောင်းစရာ…
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်
အဲဒါလည်း တစ်နေရာမှာ ရေးပြီးပါပြီ။ ဘယ်မှာလဲ မမှတ်မိတော့ဘူး။ သည်ထဲမှာ ကျွဲကူးရေပါ ပြန်ရေးမှာကို ခွင့်လွှတ်တော်မူပေးကြပါတော့ခင်ဗျား။
အမှန်တော့ နာတာက သူ့ကို မဟုတ်ပါဘူး။ သူက အနေသာကြီးပါ။ ကနေ့အထိတောင် သူသိချင်မှ သိမယ်။ သို့သော် သူနဲ့က တိုက်ရိုက် ပတ်သက်နေတယ်။
ကျွန်တော်က ဆယ်တန်းကို နှစ်ခြင်းပေါက် မအောင်ဘူး။ ပထမနှစ်မှာ ခ စာရင်း ၀င်သွားတယ်။ ဆိုရှယ်လစ် ပညာရေးရဲ့ ရွှေတလွဲ ဇာတ်လမ်းပေါ့။ အောင်တော့အောင်တယ်။ တက္ကသိုလ် တက်လို့ကျ မရဘူးတဲ့။ ကျလိုက် အေးတာပဲဟာကို၊ အလကား အရစ် ရှည်တော်မူကြတယ်။
အဲဒီ့နှစ်က အမှတ်တွေ ဖောင်းပွလို့ ဘာသာစုံအောင်သည့်တိုင် အမှတ် ၃၆၀ ပြည့်မှ အအောင်ပေးတဲ့နှစ်။ အဲတော့ ကျွန်တော်က ၃၆၀ မပြည့်ဘူး၊ မအောင်ဘူး။
အဲဒီ့ ကိုချစ်ကြွေက အောင်တယ်။ လေးဘာသာဂုဏ်ထူးနဲ့တောင်။
အောင်စာရင်းထွက်တဲ့နေ့မှာ ကိုယ်မအောင်တာကို သိပ်မဥပါဒ်ဘဲ အောင်တဲ့ကောင်တွေ အိမ်တကာ လည်ပြီး ၀မ်းသာပေးနေသူက ကျွန်တော်။ အဲဒီ့ကျွန်တော် သူတို့အိမ် ရောက်သွားတော့ ကျေးဇူးရှင်က မရှိဘူး။
၀င်ထွက်နေကျ၊ တစ်မိသားစုလုံးနဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့ အိမ်ဆိုတော့လည်း ကျွန်တော်လည်း ၀င်ထိုင်စောင့်တာပေါ့။ သူ့အမေက ဧည့်ခံတယ်။ ပြီးတော့ သူ့သားကို မွှမ်းပါတော့တယ်။ သူ့သားက ကျောင်းစာမှာ ဘယ်လို တော်ကြောင်း၊ ဘယ်လို ရည်မှန်းချက်ကြီးမားကြောင်း၊ ဘယ်လိုကြိုးစားကြောင်း၊ ဘယ်လို ထူးချွန်ကြောင်းတွေ မဆုံးတမ်း ပြောပါတော့တယ်။
ကျွန်တော် မအောင်ဘူးဆိုတာ အဲဒီ့မိန်းမကြီး အသိပဲ။ အဲဒီ့အချိန်မှာ သူက သူ့သားရဲ့ ထက်မြက်ထူးချွန်မှုတွေ နင်းကန်ဖိပြောနေတော့ ကျွန်တော့်မှာ ထိုင်ခုံအောက်ပဲ ၀င်နေရတော့မလိုလို၊ စားပွဲအောက်ဘဲ တိုးရတော့ မလိုလို ဖြစ်လာပါတယ်။ ပထမတော့ ပြုံးပြီး ဟုတ်ကဲ့လိုက်နေပါသေးတယ်။ သိပ်များလာတော့ မခံနိုင်တော့တာနဲ့ နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာလာလိုက်တယ်။ အဲဒီ့အိမ်ကိုလည်း နောက် ဘယ်တော့မှ မသွားတော့ဘူး။
အဟဲ… နောက် နှစ် ၂၀ လောက်ကြာတော့ အဲဒီ့မိန်းမကြီးကို ကုန်သည်လမ်း စာပေဗိမာန်နားလေးမှာ တွေ့လိုက်တယ်။
ကျွန်တော်က နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုဘဏ်ကနေ ပြန်လာတာ။ ဘွတ်နဲ့ ရွှတ်နဲ့၊ အပျံစား ၀တ်လို့ စားလို့။ ခါးမှာလည်း ရုံးက ပေးထားတဲ့ ပါလေရာဖုန်းကြီး ချိတ်လို့။ အဲဒီ့အချိန်က ပါလေရာဖုန်းက တကယ့် ရှားပါးကုန်။ အုတ်ခဲလောက် ရှိတဲ့ အယ်ရစ်(ခ်)ဆင်(န်) ပါလေရာဖုန်းကြီးတွေ စ ကိုင်ခါစခေတ်။ ကျွန်တော်က အလုပ်သဘောအရ ခါးချိတ်ထားရပေမယ့် ဈေးကြီးလို့ သံအမတ်တောင် ကိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ရုံးလုံးမှ နှစ်လုံးပဲ ရှိတာ။ တစ်လုံးကို ဒေါ်လာ နှစ်ထောင်ပေးထားရတာလေ။
အဲဒီ့အဘွားကြီးလည်း မြင်ရော အူယားဖားယား သွားနှုတ်ဆက်ပစ်လိုက်တယ်။ အဖွားကြီးက ချက်ချင်း မမှတ်မိဘူး။ ကျွန်တော်က ဆယ်တန်းတုန်းကလို ပေစုတ်စုတ် မဟုတ်တော့ဘဲ ဒေါ်လှအပြားစား တသွေးတမွေးဖြစ်နေပြီကိုး။ နာမည်ပြောပြလိုက်တော့ ချက်ချင်း မှတ်မိသွားတယ်။
ဘယ်မှာ လုပ်နေသလဲ ဘာလဲ ညာလဲနဲ့ စပ်စုတော့တာပေါ့။ ကျွန်တော် အမှန်အတိုင်းပဲ ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ တစ်ခုမှ လုပ်ကြံ ၀ါကြွားတာ မပါဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်လှအပြားစားဆိုတာတော့ လုပ်နေတဲ့ နေရာဌာနနဲ့ ရာထူးကို ပြောတာနဲ့ သူ သိမှာပါ။
ကျွန်တော်လည်း သူငယ်ချင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ သူ့သားအကြောင်း မေးလိုက်တယ်။
“သားသူငယ်ချင်းကတော့ အဆင်မပြေရှာပါဘူးကွယ်။ သိတယ်မဟုတ်လား၊ လူက ဘယ်လောက်တော်တော်၊ ဘာသာကွဲဖြစ်နေတာနဲ့ပဲ ချောင်ထိုးခံထားရပါတယ် သားရယ်”တဲ့။
ဒါတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီက အစဉ်အလာပါ။ လွတ်လပ်စွာ သက်ဝင်ယုံကြည်ခွင့်တို့၊ နိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူ အခွင့်အရေးတို့၊ ဘာတို့ညာတို့က စာရွက်တွေပေါ်မှာ အတိအလင်း ရှိပါတယ်။ စာရွက်ထဲမှာ ရှိပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေတာများ ရွှေပြည်ကြီးမှာ အဆန်းလုပ်လို့လေ။
တကယ်ဆို သူငယ်ချင်း သနားပါတယ်။ သူက တကယ် ထက်မြက်ထူးချွန်သူပါ။ မျိုးချစ်စိတ်ကလည်း ပြင်းထန် လွန်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လေးဘာသာဂုဏ်ထူးနဲ့ အရပ်ဘက် တက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းကို မတက်တော့ဘဲ စစ်ထဲ ၀င်သွားသူပါ။ ဒါပေမယ့် သူချစ်တဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးကတော့ ဘာသာကွဲဖြစ်နေတာနဲ့ပဲ သူ့ကိုလည်း ချောင်ထိုးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒင်းကိုက အမှတ် မရှိတာပါ။ အမှန်တော့ သူ့အဖေသည်လည်း ချောင်ထိုးခံဘ၀မှာ နေခဲ့ရပါတယ်။
ပြောတော့မှ သူ့အိမ်မှာ သူ့အဖေ ရေးပြီး ကပ်ထားတဲ့ စာတန်းတောင် ပြေးမြင်တယ်။
“ဤအိမ်သည် အညတြ စစ်သည်တစ်ဦး၏ အိမ် ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်အကူအညီမျှ ပေးနိုင်စွမ်း မရှိပါ”လို့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ရေးပြီး ကပ်ထားတာ တွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
အဲသလို မိသားစုက ဆင်းသက်တာလည်း ဖြစ်၊ ဘာသာကွဲလည်းဖြစ်နေတော့ အဲလိုမောင် ချောင်ထိုးခံရတာ ဘယ်ဆန်းပါ့မလဲနော်။
အဲဒါကိုမှ တခြားသူတွေလို ခရီးသည်တင် လေယာဉ်မောင်းပြီး ဇိမ်ကျကျ နေရမယ့်အစား ဌာနဆိုင်ရာမှာ ဆက်လက် ကုတ်ကတ်နေနေသေးတဲ့ သူ့ရဲ့ ဆင်ခြင်ဉာဏ်ကိုတော့ ရွှေချထားဖို့တောင် ကောင်းသေးတော့တယ်။ Forrest Gump ပြောသလိုဆို stupid is as stupid does ပေါ့။ ဗာလနံအပြုအမူနဲ့ သူဟာ ဗာလဆိုတာ လက်တွေ့ပြနေရှာသူပါ။ သူ့ထူးချွန်ထက်မြက်မှုက တလွဲကြီးရယ်။
ဘာပဲပြောပြော နှစ် ၂၀ ကျော်အကြာမှာ အဲဒီ့အဘွားကြီးကို အဲသလို ပုံစံနဲ့ တွေ့ဆုံ ပြောဆိုလိုက်ရတော့ အတော် အားရသွားတယ်။
ပြောရတာတော့ မကောင်းဘူးဗျ။ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေက တစ်မျိုးပဲလို့သာ ဆိုရမယ် ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ အတော် အထင်သေးခံရတဲ့ ဘ၀မှာ နေခဲ့ရသူပါ။ အဖေက စာရေးဆိုတော့ စာရေးသားပေါ့။ အဖေက အငှားယာဉ်မောင်းဆိုတော့ ဒရိုက်ဗှာရဲ့ သားပေါ့။ ငယ်ဘ၀တုန်းကလည်း အထင်သေးခံခဲ့ရတယ်၊ အနှိမ်ခံခဲ့ရတယ်။
ကြီးကောင်လေး ၀င်လာတော့လည်း မထူးပါဘူး။ စာတော်တဲ့သူတွေကြားမှာ သူလိုငါလို ကျွန်တော်က အလကားကောင်ပဲလေ။
ရှိသေးတယ်။ ကျွန်တော် ပထမနှစ်တက်နေစဉ်မှာ အဖေ ပျောက်သွားတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း နေ့ချင်း ညချင်း တက္ခဆီ ဒရိုက်ဗှာဖြစ်ပါရောလား။
အဟဲ… တစ်နေ့သောအခါမှာ ဆေးကျောင်းတက်နေကြတဲ့ ဆယ်တန်းတုန်းက အေတန်းရဲ့ အတန်းဖော် သူငယ်ချင်း တစ်အုပ် ရောက်လာကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေ ကျွန်တော့်ဆီ လာလည်တယ်ဆိုပြီး ၀မ်းသာအယ်လဲ။
ဘယ်ဟုတ်မတုံး။ မောင်မင်းကြီးသားတွေက ကျွန်တော့်ကို ဖာရှာပေးဖို့ လာပြောကြတာခင်ဗျ။
ကျွန်တော်က အဲဒါတွေ စိတ်လည်း မ၀င်စား၊ သိလည်း မသိဘူး။ မသိတာကို မသိဘူးလို့ ပြောတော့ “လုပ်မနေပါနဲ့ကွာ။ တက္ခဆီ မောင်းနေတဲ့သူဆိုတာ ဒါမျိုးတွေ ကောင်းကောင်း သိတာပဲဟာ၊ မင်းကလည်း အချင်းချင်းတွေကို… မလျှိုပါနဲ့…”လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း တော်တော် ဒေါသထွက်သွားတယ်။
“ငါ ကားမောင်းနေတာ၊ ဖာခေါင်းလုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ မင်းတို့ကို ငါဆွဲမထိုးခင် သွားကြတော့”လို့ ပြောလိုက်မှ ကိစ္စပြတ်တော့တယ်။ ဒါတောင် သိပ်ကျေနပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ အိမ်မြှောင်အကြည့်နဲ့ ပေစောင်းစောင်း ကြည့်ရင်း ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။
အမယ်… နှယ်နှယ်တော့ မမှတ်နဲ့နော… အဲဒီ့အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်လာသူက ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လူ့မလိုင် ရေပေါ်ဆီ အသိုင်းအ၀ိုင်းက လာတဲ့ကောင်၊ ၀င်ဒါမီယာမှာ နေတဲ့ကောင်။ အငှားယာဉ်မောင်းတိုင်းကို ဖာခေါင်းမှတ်ပြီး ဖာရှာခိုင်းတဲ့ကောင်ပေါ့။ အခုတော့လည်း သင်း သေရှာပါပြီ။ လူ့ပြည်မှာ သက်တမ်းစေ့ ဝေးစွ။ နှစ် ၃၀ တောင် ပြည့်ပြည့် နေမသွားရရှာဘူး။ မရဏမင်းဆီမှာတော့ ဖာ သွားရှာနေသေးလား မသိပါဘူး။
အမယ်… ဒါနဲ့တင် မပြီးသေးဘူးဗျ။ လေးဆယ်ကျော်မှ အထင်သေးခံရတဲ့ ဇာတ်လမ်းက လာသေးတယ်။ သံရုံးကနေ အလုပ်ပြုတ်လာတုန်းကပေါ့ဗျာ။
“ခင်ဗျား အလုပ်ပြုတ်လာတယ်ဆိုတော့ ခင်ဗျား မိသားစုအတွက် ပူမိတယ်ဗျ”
အစချီတာကတော့ အဟုတ်ပါပဲ။ ဆက်ပြောတာက…
“ဒါပေမယ့် ခင်ဗျား ကားမောင်းတတ်တာပဲလေ။ အရင်ကလည်း မောင်းခဲ့ဖူးတာ မဟုတ်လား။ အဲတော့ ကားမောင်းစားနိုင်တာပဲဆိုတာ တွေးမိပြီး မပူမိတော့ဘူးဗျ”တဲ့။
ဟုတ်တာပေါ့။ ပြောသူက ဆရာဝန်။ ပြည်တွင်းဖြစ် မဟာဘွဲ့လေးတစ်ဘွဲ့ပါ ထပ်ရထားတော့ အထူးကုတန်းကို ပွတ်ခါသီခါ ၀င်တယ်ပေါ့ဗျာ။ သည့်ထက်သာတာက သူက မအေပေးတဲ့ တုတ်တစ်ချောင်းကို အကြောင်းပြုပြီး ကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့သူ။ သူ့ယောက္ခမက အကျင့်ပျက် ခြစားမှုပေါင်းစုံနဲ့ ကျိကျိတက် ချမ်းသာသွားပြီးမှ အထုတ်ခံထားရတဲ့သူ။ ကား ဆယ်စီးလောက်၊ လူကုံထံ ရပ်ကွက်တွေမှာ မြေကွက်ကြီးတွေ လေး၊ ငါးကွက်လောက် ရှိတဲ့သူဆိုတော့ ပြောအား ရှိနေတာပေါ့။
ကြာတော့ ထူလာတယ်။ လူတွေရဲ့ မနောကိုလည်း ပိုလို့ ပိုလို့ သဘောပေါက်လာတယ်။ သူတို့ရဲ့ အတွင်းစိတ်တွေကို မြင်နေရတာကိုက အမြတ်တစ်ခုပဲလို့ အောက်မေ့တတ်လာပါတယ်။ အားနည်းသူကို နှိမ်ချင်တတ်တာကိုက လူတွေရဲ့ သဘာဝလို့တောင် တွေးမိလာတဲ့အထိပါပဲ။
ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ ပြောင်းပြန်။ ကျွန်တော်က လူတစ်ယောက် လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်နေပြီဆိုရင် ဘယ်လောက် ခင်နေနေ လှည့်ကို မကြည့်တော့ဘူး။ အနားလည်း မကပ်တော့ဘူး။ အဲ… အဆင်မပြေဖြစ်နေပြီ၊ ကျဆုံးနေပြီဆိုရင် သူတို့အနားကို ကျွန်တော် ရောက်သွားပြီ၊ တတ်နိုင်သမျှ ဖေးမပေးနေမိပြီ။ နှိမ်ချင်တဲ့စိတ်၊ ၀မ်းသာတဲ့ စိတ်နဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ချင်းစာတဲ့ စိတ်နဲ့ပါ။
အောင်မြင်နေချိန်ဆိုရင် သူတို့နားမှာ ပရိသတ်က ၀ိုင်းနေတတ်တယ်။ ကျနေပြီဆိုရင်တော့ အနားမှာ ပြေးကြည့်လိုက်ရင် မိသားစုကတောင် သိပ်လိုလိုချင်ချင် မရှိကြတော့တာ မြင်ဖူးပေါင်း များလှပြီ။ ဒါ့ကြောင့် အကျသမားတွေကို ကျွန်တော်က အမြဲလို ဖေးမမိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူတိုင်းက ကျွန်တော်မှ မဟုတ်တာ။ ကျွန်တော့်အကျိုးပေး ကောင်းပုံများ၊ ကျွန်တော်မို့ ကျမနေနဲ့၊ ဖိနင်းချင်တဲ့သူက အဆင်သင့်ရယ်။ ဒါကိုက ကံထူးခြင်း တစ်မျိုးပေါ့လေ။ အဲဒါတွေကနေ အားအင်တွေ ဖြစ်လာခဲ့တာပဲ ထင်ပါရဲ့။
တကယ်တော့ အဲလိုလည်း မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်ဗျ။
ကျွန်တော်က ဘာကိုမှ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ သိပ်အရေးစိုက်တတ်တဲ့သူမျိုးလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ကျွန်တော် အရေးစိုက်တာက ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်။ ကျွန်တော်ပြိုင်နေတာက ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော်။ အပျင်းကြီးတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ဘာလုပ်လုပ်၊ စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်ပြီဆိုရင် စိတ်က အလုပ်ထဲမှာပဲ ရှိတော့တယ်။ ကျန်တာ ဘာကိုမှ မစဉ်းစားမိတော့ဘူး။
ပြီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ့်ဘာသာဝေဖန်ရေးလုပ်တာက မဆုံးတော့ဘူး။ ဘယ်နားလေးမှာ ဘယ်လို လုပ်လိုက်ရင် ပိုကောင်းသွားမှာ၊ နောက်တစ်ခါကျရင် ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာကို အမြဲတစေ ပြန်သုံးသပ်မိတယ်။ မနေ့က ကျွန်တော်ထက် သည်ကနေ့ ကျွန်တော်က သာနေရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်က ဆောင်နေတယ်။ အဲဒါပဲ။
သူများတကာတွေ ပြိုင်နေတဲ့အရာဆိုရင် ကျွန်တော်က ၀င်ကို မပြိုင်တော့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကျောင်းစာမှာ တော်ရိလျော်ရိ နေပစ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်လောက်တယ်။ အဲလို ပြိုင်နေတဲ့သူတွေကို ကြည့်ပြီး မောတယ်။ ပျင်းတယ်။ အဲတော့ ပြိုင်ဖို့လည်း စိတ်မကူးတော့ဘူး။ လုပ်ကြကွာဆိုပြီး အသာ လွှတ်ပေးထားလိုက်ပါတော့တယ်။
အဲဒါကလည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက အမေ့ရဲ့ တွန်းအားကို ဆန့်ကျင်လိုတဲ့ စိတ် ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အမေက အရမ်းပြိုင်ခိုင်းတာ။ ဘယ်ကလေးက ဘယ်လို၊ ဘယ်ကလေးရဲ့ မစင်ကိုဖြင့် မင်းစားသင့်တယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေ နှလုံးနာချင်စရာ ကောင်းအောင် ကြားခဲ့ရတယ်။ ဟို သူငယ်ချင်းရဲ့ အမေပြောနည်းကား မူကွဲတစ်မျိုးပေါ့။
ဟိုမိန်းမကြီးကလည်း သူ့သားအကြောင်း မွှမ်းရင်း မအောင်တဲ့ ကျွန်တော် မခံချင်အောင် ဆွပေးတဲ့နည်းနဲ့ ကျွန်တော် နောက်နှစ်မှာ ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ပြောတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲသလို စကားတွေက ကျွန်တော့်နားထဲမှာ အမေက ပြောဖန်များလွန်းလို့ ခါးလှပြီ။ စက်ဆုပ်လှပြီ။
ခင်ဗျားတို့ သိပ်အထင်ကြီးတဲ့ ရွှေကျောင်းစာမှာ ဘာမှ ဖြစ်မလာတော့ ဘာအရေးလဲဗျာဆိုတဲ့ ရွဲ့တွေးက အခိုင်အမာ ၀င်နေပြီလေ။
ကျွန်တော် အလုပ်ပြုတ်လာတော့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ သမီးလေး၊ ဆေးကျောင်းတက်နေတဲ့ ကလေးမလေး တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို သူ့လက်နဲ့ ဆွဲထားတဲ့ ကတ်ပြားလေးတစ်ခု ပို့ပေးခဲ့တယ်။ စာတမ်းလေးကို အင်္ဂလိပ်လိုလည်း သူ့လက်ရေးနဲ့ ရေးထားသေးတယ်။ “ဘ၀က ကိုယ့်ကို သံပရာသီးတွေ ပေးလာတဲ့အခါ သံပရာရည်သာ ဖျော်သောက်လိုက်ပါ”တဲ့။ အင်္ဂလိပ်စကားပုံလေးပါ။
လူငယ်လေး တစ်ယောက်ကတောင်မှ ကျွန်တော့်ကို ချက်နဲ့လက်နဲ့ ဖေးမပေးခဲ့တာလေးက ကြည်နူးစရာလေးပါ။ သူ့အမေကလည်း ဘာကူညီရမလဲလို့ မေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပါလား၊ သူသင်ခဲ့တုန်းက သုံးတဲ့ စာအုပ်တွေ ယူမလား အစရှိသဖြင့် ပြောပါတယ်။ လူလူချင်း ရိုင်းပင်းတာပေါ့။
အဲလိုမျိုးတွေ မဟုတ်ဘဲ ဖိနင်းချင်တဲ့သူတွေကျတော့လည်း အင်း… လူ့သဘာဝပေါ့လေ။
ငယ်ဘ၀ဆီ ပြန်သွားရင်တော့ အားကစားမှာသာ အဖြစ်မရှိတာ ဖဲတော့ ရိုက်တတ်လာတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒါကလည်း လမ်း ၄၀ ပေါက်ဖော် ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပါပဲ။ ပထမတော့ ကိုးမီးပေါ့။ နောက်တော့ နှစ်ဆယ့်တစ်ပေါက်ပေါ့။ နောက်တော့ တစ်ချပ်မှောက်ပေါ့။ အဆင့်ဆင့် တတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါလည်း ကိုအောငံနဲ့ အပေါင်းအသင်းများ ကျေးဇူးပါပဲ။ ကိုအောငံတို့ အိမ်က အောက်ထပ်ဆိုတော့ ဖဲရိုက်လို့ သိပ်မကောင်းတာမို့ တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ လာရိုက်ကြတာပေါ့။ အဲတော့လည်း တစ်အိမ်လုံး စည်နေတော့တာပေါ့။ အမေ့ လက်ဖက်သုပ်၊ ပဲခြမ်းကြော်သုပ်များကလည်း သူတို့ကြားမှာ ရေပန်းစားသပေါ့ဗျာ။
သည်နေရာမှာ ပဲခြမ်းကြော်သုပ်အကြောင်း ပြောဖို့ လိုလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ပဲခြမ်းကြော်သုပ်မှာ အဆာပလာ ထည့်တတ်ရင် ထည့်တတ်သလောက် အရသာ ထူးပါတယ်။ အမေ့ဆီက ရလိုက်တဲ့ နည်းကတော့ ပဲခြမ်းကြော် သုပ်မှာ ပဲခြမ်းကြော်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဆီ၊ ဆား၊ သံပရာသီးအပြင် ကြာညို့ (ပဲငံပြာရည်အနောက်) ကလေး သုံး၊ လေးစက်ကလည်း အခရာကျသလို ပူတီနံနဲ့ မဆလာကလည်း အနှစ်အသားပါပဲ။ အဲဒါတွေ အစုံအလင်ပါတဲ့ ပဲခြမ်းကြော်သုပ်ဟာ ဟင်းတစ်ခွက်တောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မေမေ ပဲခြမ်းကြော် သုပ်ကျွေးရင် ကိုအောငံ သူငယ်ချင်းတွေက ထမင်းကြမ်းပါ တောင်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုစိန်အောင်ဆိုတဲ့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနဲ့ ဖရေဇာလမ်းထောင့်မှာ ယနေ့ထက်တိုင်ရှိနေသေးတဲ့ အပေါ်ထပ်ထောင့်ခန်း အလှပြင်ဆိုင်က လူတစ်ယောက်ဟာ ပန်းကန်ထဲမှာ ကျန်နေတဲ့ ညိုတိုတို အရည်လေး လက်ဖက်ရည် ဇွန်းဝက်လောက်ကိုပါ မော့သောက်တဲ့အထိ ကြိုက်တာပါ။ အဲဒီ့အစ်ကိုကြီး ကိုစိန်အောင်ကတော့ ကနေဒါ နိုင်ငံကို ထွက်သွားခဲ့တာ ၃၅ နှစ် မကတော့ဘူး ထင်ပါတယ်။
မန္တလေးသူ မေမေဟာ လက်ဖက်ကိုလည်း မပြတ်စားတာမို့ အိမ်မှာ လက်ဖက်ကလည်း ပြတ်တယ် မရှိဘူး။ အဲတော့ ကိုအောငံနဲ့ အပေါင်းပါများအတွက် တစ်မျိုးတော့ အဆင်ပြေနေတာပေါ့။
အဲဒီ့ထဲမှာ ကိုထက်ဒီဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုလည်း ကျွန်တော်မှတ်မိနေသေးတယ်။ သူက စပါ့(ခ်)(စ်)လမ်းနဲ့ ဖရေဇာထောင့်၊ အခုအချိန်အထိ ရှိနေသေးတဲ့ ၁၉၂၈ ခုနှစ်က ဆောက်ထားတဲ့ တိုက်အိုကြီးရဲ့ သုံးထပ်၊ ထောင့်ခန်းမှာ နေတဲ့သူ။
Kyi Kyi Khin ကျမဆိုလည်း တစ်သက်လုံး အနှိမ်ခံခဲ့ရလို့ ထင်တယ်။ တော်ရုံဆို မနာဘူး… ဟီး… ထူနေတာ။ ဒါပေမယ့်လည်း မကြိုးစားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ မူလတန်းတုန်းက သိပ်မသိခဲ့ဘူး။ အထက်တန်းနဲ့ ကောလိပ်မှာ အရာရှိသမီး မဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် အရည်အချင်း တူချင်းဖြစ်နေတာတောင်မှ တော်ရုံ အခွင့်အရေးကို တစ်ခါမှ မရခဲ့ဖူးဘူး။ အဲဒီတုန်းက ဆရာ ဆရာမတွေ အပေါ်လဲ ဆူးတွေ အချောင်းချောင်းနဲ့။
Kyawt Thuzar ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ မြင်ယောင်ကြားယောင် လာတာက နင်ပျံနေအောင် တော်ပြီး သေအောင် ကြိုးစားလည်း အမှတ်မီတောင် ဆေးကျောင်း မတက်ရဘူး။ ငါ့အဖေက ဗိုလ်ချုပ် ဝန်ကြီးဆိုတော့ ငါက ဆေးကျောင်း တက်ရတယ်။ အဖြေလွှာချင်း လဲလိုက်ရုံဆိုတဲ့ တစ်ယောက်သောသူရဲ့ စကား။ ခုချိန်ထိ ရက်တိုင်းမှာ တဆစ်ဆစ် နာတယ်။
ATK မနာပါနဲ့တော့လေ။ ကျွန်တော့် သမော်ဒီးလက်ထက်ကျတော့ အဲလောက်တောင် မလိုတော့ဘူးဗျ။ သမော်ဒီးက ၆ ဘာသာ ဂုဏ်ထူး ထွက်မယ့်သူလို့ သတင်း မွှေးနေတယ်။ (ကျွန်ုပ်က သူ့ကို ကျောင်းစာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တစ်ခါမှ အားမပေးခဲ့ဖူးဘဲနဲ့ ဒင်းကိုက လော်မာတာ။ 😀 )
အဲတော့ ပြိုင်ဖက် ဘော်ဒါကသမီး ၆ ဘာသာ မထွက်အောင် တစ်ဘာသာကို ကျပ်တစ်သိန်းပဲ အကုန်ခံလိုက်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ကျပ် နှစ်သိန်း အကုန်ခံလိုက်တာနဲ့၊ ကျွန်တော့် သမော်ဒီး အရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးဟာ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ မြန်မာစာတို့မှ နှစ်မှတ်လျော့စီနဲ့ ဂုဏ်ထူး မပါတော့ဘူးခင်ဗျ။ အမှတ်ပေါင်းကျတော့ လေးဘာသာရှင်က ၅၁၂ မှတ်တဲ့။
ကျွန်တော်တို့ကလည်း မသမာမှု မှန်သမျှ စိတ်ကို မ၀င်စားတဲ့သူဆိုတော့ တစ်ဘာသာ နှစ်သိန်းလောက် ပေးလိုက်ရင် ၆ ဘာသာ ပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။
ခေတ်ပညာရေးကို ကျွန်တော်တို့က အပြတ်အသတ် စွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံကြည်တဲ့အတွက် အဲဒီ့ ၅၁၂ မှတ်ရှင် သမော်ဒီးဟာ မြန်မာပြည် ပညာရေးအရဆိုရင် ဆယ်တန်းအောင်ဆိုတာနဲ့ပဲ ကျောင်းပြီးသွားပါတော့တယ်။ (လျော်ကြေးပေးစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။) 🙂
Kyawt Thuzar ခေတ်စားလို့ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ကလေးဘဝတည်းက အသားကုန် ဝါသနာပါခဲ့တဲ့ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကို အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး လုယူသွားတာကို ခံပြင်းခဲ့တာပါ။ ခုနေ ဆေးကျောင်းပြန်တက်ဆိုလဲ မတက်တော့ပါဘူး။ အဓိက လုယူခံလိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို တင်းတာ။ မိဘကလဲ တွန်းအား ပေးတဲ့နေရာမှာ ဆရာ့မိဘနဲ့ မကွာလှဘူး။ ဦးနှောက်ထဲ သွေးခဲပြီး လေဖြတ်ရုံလေးတင် တွန်းတာပါ။ ခုများတော့ သူများနဲ့ နှိုင်းပြီး တွန်းရင် အဲ့တစ်ယောက်ကို သိပ်အထင်ကြီးတယ်မို့လား အဲ့တစ်ယောက်ပဲ သွားပြီး သားသမီးတော်လိုက်ပါတော့လို့ ပြောမိပြီ။ အခုမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တော်တော် ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့လူ ဖြစ်သွားမှန်း သတိထားမိတော့တယ်။ လိုချင်လှချည်ရဲ့ဆိုတာလည်း ဘာမှ မရှိတော့သလို ကြောက်လှချည်ရဲ့ ဆိုတာလဲ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး 😛
Moemakha Hlaing ဖတ်ရတာ အရသာရှိလိုက်ထှာ။ ပဲခြမ်းကြော်သုပ် အကြောင်းလည်း ရောက်ရော လျှာတွေ စိုလာတယ်။ ပူတီနံ မဆလာထည့်တာတော့ မစားဘူးသေးဘူး။ ကြာညို့ ဆမ်းပြီး သံပုရာသီးညှစ်စားတာတော့ ဝမ်းတွင်းက သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ စားဖူးထဲက အဲဒီလိုပဲ သုပ်စားတယ်း)
ATK အကောင်းမှတ်လို့ မမှိုင်ရယ်။
Moemakha Hlaing ဆောရီးဆရာ edit လုပ်တာ delete ဖြစ်သွားလို့ ပြန်မန့်မယ်နော်။ 🙂
ကျမညီမက သင်္ချာအရမ်းတော်ပါတယ်။ ဆယ်တန်းမှာ သင်္ချာ အမှတ်၁၀၀ အပြည့်လို့တွက်ထားတာ ရွှေတံဆိပ်ရ နာမည်ကြီး ကျူရှင်ဆရာကိုယ်တိုင် သူ့ခြေရာနင်းမယ့်သူလို့ယုံကြည်သူပါ။
အောင်တော့ ဒီတစ်လုံးမှ မပါပါဘူး။ အနည်းဆုံ ဒီ ၄ လုံးလောက် မှန်းထားသူ ဖြစ်တဲ့အပြင် အဲဒီမေးခွန်းတွေကို ချက်ခြင်းပြန်ဖြေပြနိုင်တဲ့ သူမျိုးပါ။
သူ့ အမှတ်စာရင်းကို ဆွဲဆုတ်ပစ်တဲ့အထိ ဒေါသထွက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်္ချာဝါသနာကြီးလို့သင်္ချာမေဂျာပဲ ယူပါတယ်။ ကျမတို့ ယူနီကြီးမှာ ဆရာမှားနေရင် ပြောခွင့်မရှိပါဘူး။ မိုင်နာ ဘာသာတစ်ခုမှာ ဆရာမ အမှားထောက်ပြမိလို့မျက်ငြိုးဆိုက်ခံရပါတယ်။ မေဂျာ အကုန် ဂုဏ်ထူးထွက်ပေမယ့် မိုင်နာဘာသာကျနေလို့ဌာနမှူးချင်း ညှိနှိုင်းပြီးတော့ ဂုဏ်ထူးတွေ ဖြုတ်ပြီး ရိုးရိုးအောင်နဲ့ပဲ အအောင် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါက ဆရာတွေ ပြောပြလို့ သိတာပါ။
အဲဒီမိုင်နာ ဘာသာဆရာမကိုယ်တိုင် နင်က ဘယ်လိုလုပ် အောင်သလဲလို့ မေးမှ ကိုယ်တိုင်ဖြေနိုင်သော်လည်း သူ့ ပယောဂကြောင့် ကျတယ်ဆိုတာ ပိုသေချာသွားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျမညီမလည်း သင်္ချာ ပါရဂူ ဖြစ်ချင်စိတ် ပျောက်သွားပါတော့တယ်။ ဆယ်တန်းမှာ အောင်ဖို့ဂုဏ်ထူးထွက်ဖို့လိုက်လို့ ရတယ်ဆိုတာ… မယုံချင်ပါဘူး။
တက္ကသိုလ် အောင်မှတ် ခရက်ဒစ်မှတ်ကလည်…
Gam Awng “ဘ၀က ကိုယ့်ကို သံပရာသီးတွေ ပေးလာတဲ့အခါ သံပရာရည်သာ ဖျော်သောက်လိုက်ပါ”… Like.
ATK Original English proverbial phrase is “When life gives you lemons, make lemonade,” Saya Gam.
And here’s another, and I’m sure you like this better, SayaGam!
Gam Awng Thanks Saya,.. ဆရာ့စာတွေဖတ်ရတာ ဆရာပြောသလို အဟောင်းတွေအစုတ်ဖြစ်… အဲလေ ကျနော်လည်း ငယ်ဘဝက ဆူးတွေပေါက်ခဲ့တာ ပြန်သတိရ.. ဒါတွေကပဲ ကိုယ့်အတွက်တွန်းအားတွေ ဖြစ်ခဲ့တာတွေ သတိရပါ၏ ဆရာရေ…
ATK လူတိုင်းရဲ့ ဘ၀မှာတော့ သူ့အနာလေးတွေနဲ့ သူ၊ သူ့အခံလေးတွေနဲ့ သူ ကိုယ်စီ အသက ရှိကြမယ့်သူချည်းပဲ ထင်ပါတယ် Saya Gam ရေ့။
ကွယ်လွန်သူ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းကြီး သည်ဇာတ်ထဲက နာမည်လွှဲထားတဲ့ မောင်ဘိုနီတို့ဆို ရွှေမှုန်စား၊ ရွှေဇွန်းကိုက် မွေးလာတဲ့ အမျိုး။ သူ့အဘိုးဆိုတာ ဗြိတိသျှ အစိုးရလက်ထက်က ၀န်ကြီး။ သူတို့ဆို ဘာအနာအဆာမှ ရှိမယ် မထင်ရဘူး။
ဒါပမယ့် သူတို့ မောင်နှမ လေးယောက်စလုံးမှာ အနာအဆာ ကိုယ်စီနဲ့ဆိုတာ ကျွန်တော် တအံ့တသြ သိခဲ့ရတယ်။ သူ့အစ်ကိုရယ်၊ သူရယ်တို့ရဲ့ နှုတ်က ဖွင့်ပြောတာတွေ ကြားလိုက်ရတော့မှ တကယ်ကို အံ့အားသင့်သွားတာ။ သူတို့ မောင်နှမတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အမူအကျင့်တွေကိုလည်း နားလည်လာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်စာတွေ ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ပြန်သုံးသပ်ဖြစ်သလို အမူအကျင့် ထူးခြားသူများနဲ့ ဆုံတဲ့အခါ အဲဒီ့လူတွေရဲ့ ကိုယ်သိမထားတဲ့ နောက်ခံ အနာတရတွေကို ထည့်တွက် ငဲ့ကွက်ပြီး နားလည်သည်းခံပေးလို စိတ်များ စာဖတ်သူတွေမှာ ပေါက်ဖွားလာမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာရေ… ကျွန်တော် အိပ်သွန်ဖာမှောက် ကပေါက်တိကပေါက်တွေး လျှောက်ရေးရကျိုး ဆတိုး ပြည့်စုံသွားပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျား။
Htar Htar Myint သာမီးလည်း အဲလိုပဲ ဆယ်တန်းကို အောင်ရုံ၊ ဘွဲ့ကိုလည်း ရရုံပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူလည်ဆိုတာ သိတော့ အဲဒီ့မှာဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် သည်မှာကတော့ ဆရာမကြီး ဖြစ်လာတာပေါ့ သည်မှာကတော့ ဉာဏ်ရည်နဲ့ အလုပ် လုပ်တတ်တဲ့သူတွေက နေရာကောင်းကောင်း အမှတ်ကောင်းကောင်း ရတယ် ဦးကြီးရေ။ ဘာအကပ်မှ မလိုဘူး။
Author lettwebawPosted on 21 March 2015 30 March 2015 Categories MemoirsLeaveacomment on အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ – ၆